ရန်ကုန်တိုင်းမ် - အဘအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာဖို့ ဘယ်လို စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတာ သိလိုပါတယ်။ ဦးပီတာလင်းပင် - သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ တိုင်းရင်းသားရင်ကြားစေ့ရေး လုပ်မယ် ဆိုတာကို ထုတ်ပြန်တယ်။ အဘအနေနဲ့လဲ ဒီကိစ္စကို လက်ခံကြိုဆိုကြောင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသံအမတ်ကြီးကနေတစ်ဆင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးထံ ကို စာတစ်စောင်ရေးလိုက်တယ်။ ဒီစာထဲမှာ ပြည်ပနိုင်ငံကို ရောက်နေတဲ့ ၂၁နှစ်တာကာလအတွင်း ဒီလိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သမ္မတကြီးတို့ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတဲ့ကိစ္စဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ့် ပြည်တွင်းစစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးနဲ့ အမျိုး သားရင်ကြားစေ့ရေးကိစ္စကိုအောင်မြင်မယ်လို့ ယူဆတဲ့အတွက် ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုဆိုကြောင်းပါတယ်။ ဒီလို ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုဆို တာကို လက်တွေ့ပြတဲ့အနေနဲ့ တိုင်းပြည်ကို ပြန်လာမယ်လို့ လဲ ထည့်ရေးထားတယ်။ စာပို့လိုက်ပြီး မကြာခင်ရက်ပိုင်း အတွင်းမှာ မြန်မာပြည်ကို ပြန်လာလို့ရပြီဆိုပြီး အကြောင်း ပြန်လာတယ်။ မြန်မာပြည်ပြန်ဖို့ကိစ္စကို အမေရိကန်က မြန်မာသံရုံးရယ်၊ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနရယ်က ကူညီကြတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံ မြန်မာသံရုံးကလဲ လေယာဉ်လက်မှတ် ကအစ ကူညီပေးပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်းမ်- အဘက ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရမှာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတာဝန်ရော၊ လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့မှာလဲ သဘာပတိအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုတော့ ဒီလို မြန်မာပြည်ပြန်လာဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါ ပြည်ပရောက် မြန်မာ အသိုင်းအ၀ိုင်းဘက်က ဘယ်လိုပြောဆိုကြတယ်ဆိုတာ သိလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဦးပီတာလင်းပင်- ပြန်လာဖို့ကိစ္စကို အေဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ် ခေါင်းဆောင် ကိုထွန်းအောင်ကျော်တို့၊ ကိုမိုးသီးဇွန်တို့၊ မကြာမီက အမေရိကားရောက်လာတဲ့ နေတင်မြင့် ပြီးတော့ အန်အယ်လ်ဒီလူငယ်ခေါင်းဆောင် ကိုမြင့်စိုးတို့နဲ့ စကားပြောဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကို အဘလဲ အသက်ကြီးနေပြီ။ ဒီကိစ္စကို ပါဝင်ပတ်သက်ရမယ်ဆိုပြီး တိုင်ပင်ခဲ့ပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်းမ်- အဘက ၁၉၉၀ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြင်ဦးလွင် မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှာ ရွေးကောက်ခံရတဲ့ ကိုယ် စားလှယ်လောင်းတစ်ဦးပါ။ အခုအခြေအနေမှာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကြီးလဲ ကျင်းပပြီးစီးပါပြီ။ လွှတ်တော်ကိုလဲ ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ စတင်နေတဲ့အပေါ် မှာ ဘယ်လိုသဘောထားရှိပါလဲ။
ဦးပီတာလင်းပင်- အခုက အသိအမှတ်ပြုလို့ အဘတို့နဲ့ သူတို့နဲ့ ဆက်ဆံနေတာပါ။ ၁၉၉၀ရွေးကောက်ပွဲကို သူတို့က မူအား ဖြင့်သာ အသိအမှတ်မပြုတာပါ။ အသိအမှတ်မပြုဘူးဆို ရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သူတို့နဲ့လဲ တွေ့စရာမလိုဘူး။ အဘကိုယ်တိုင်က ၁၉၉၀ရလဒ်ကဖြစ်လာတဲ့ အမတ်တစ် ယောက်ကို သမ္မတကြီးကိုယ်တိုင်က လက်ခံကြိုဆိုတဲ့ဥစ္စာ က အသိအမှတ်ပြုတာလေ။ ဘယ်လိုအသိအမှတ်ပြုလဲ ဆိုတာက တိုင်းပြည်ရဲ့ ပြည်တွင်းစစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးနဲ့ အမျိုး သားရင်ကြားစေ့ရေးကိစ္စတွေ ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာ ပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်ချင်စိတ်ရှိပြီး၊ တကယ်လုပ်မယ့်လူတွေ ကိုကြိုဆိုတယ်လေ။ အဘလဲ ဒီကိစ္စတွေကိုကြိုဆိုလက်ခံ ပြီး မြန်မာပြည်ကိုပြန်လာခဲ့တာပါ။
ရန်ကုန်တိုင်းမ်- မြန်မာနိုင်ငံဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုတွေအတွက် အဘ အနေနဲ့ဘယ်ကဏ္ဍတွေမှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ အစီအ စဉ်ရှိနေပါသလဲ။
ဦးပီတာလင်းပင်- ပြည်တွင်းစစ်ချုပ်ငြိမ်းရေး၊ တိုင်းရင်းသားရင် ကြားစေ့ရေးကိစ္စတွေက အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ အဘအ နေနဲ့ အဲဒီကိစ္စတွေကို တတ်နိုင်သလောက်လုပ်ဆောင်ပေး ဖို့ရှိပါတယ်။ အဘအသက်ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းက တိုင်း ပြည်မှာအနိဋ္ဌာရုံတွေပဲ မြင်တွေ့လာရတာ။ အဘ ပြည်ပမှာ နေထိုင်စဉ်ကတည်းက သိလာတာက မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေ တဲ့ကိစ္စရပ်တွေက တိုင်းတစ်ပါးအကူအညီမယူဘဲ ကိုယ့် ဘာသာဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စဆိုတာပါ။ ဒီဟာကို သမ္မတကြီး ကိုပေးတဲ့စာမှာလဲ ထည့်ရေးထားတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်နဲ့ သမ္မတကြီးရဲ့ ဥပဓိရုပ်တွေကြည့်ခြင်းအားဖြင့်လဲ သူတို့လုပ်နေတာတွေကို အယုံအကြည်ရှိတယ်။ ဒီအတွက် မြန်မာပြည်ကိုပြန်လာတာ။ အဘအနေနဲ့ အသက်ကြီးနေ ပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့လဲ မရှိဘူး။ လူမှုရေး ကိစ္စရပ်တွေ၊ ကျန်းမားရေးကိစ္စရပ်တွေ၊ ဖွံဖြိုးရေးနဲ့ ဆိုင် တဲ့ကိစ္စရပ်တွေ၊ တိုင်းရင်းသားကိစ္စရပ်တွေပဲ လုပ်ဖို့ရှိတယ်။ အဘက တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ နှစ်ပေါင်း များစွာနေလာခဲ့တယ်။ ပြည်ပရောက် လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်တွေနဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါင်းဖွဲ့ ထားတဲ့ ငါးဦးကော်မတီမှာ အဘက အတွင်းရေးမှုး(၁)တာ ၀န်ယူထားတယ်။ ဥက္ကဋ္ဌက ကရင်နီက ဆရာရေမန်ထူး၊ ဒုဥက္ကဋ္ဌက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ထဲက ဦးသိန်းဦး၊ အ တွင်းရေးမှုးအဖွဲ့ထဲမှာ ကရင်လူမျိုးက တစ်ယောက်ပါတယ်။ မွန်လူမျိုး ဆရာနိုင်ဟံသာက အတွင်းရေးမှုး။ ဒီငါးယောက် ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့မှာ အဘတာဝန်ယူတာဆိုတော့ တိုင်း ရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေက အဘဆို ယုံတယ်။ အဘက ဘယ်သူနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ယုံကြည်မှုရှိမှ လုပ်လို့ရတာ။ တချို့က အစိုးရကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်ကို သို့လော၊ သို့လောဖြစ်နေတယ်။ အဘက အဲဒီလိုမဖြစ်ဘူး။ ဇဝေဇ၀ါ ဖြစ်နေမယ့်အစား ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ပါဝင်လှုပ်ရှားမယ် ဆိုရင် အချိန်ကာလတိုတိုလေးမှာ တိုင်းပြည်က တိုးတက် နိုင်တယ်။ နိုင်ငံခြားကိုလဲ အားကိုးလို့မရဘူး။ သူတို့က ကိုယ့်တိုင်းပြည်ထက်၊ သူ့တိုင်းပြည်ကိုသာ သူချစ်မှာပါ။ အဘထင်တာက လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကို မိသားစု စိတ်ဓာတ်နဲ့ ကိုယ်တိုင်ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်းဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေသွားမယ်လို့ ထင်တယ်။
ရန်ကုန်တိုင်းမ်- ပြည်ပမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေကို ဘယ်လိုမြင်ကြပါ လဲ။ အဘလိုပဲ မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာဖို့ ရှိပါသလား။
ဦးပီတာလင်းပင်- မြန်မာပြည်ကို အဘ ကနဦးထွက်လာတာ ပါ။ အဘက ခိုးပြီးထွက်လာတာမဟုတ်ဘူး။ မိုးသီးဇွန်တို့၊ ထွန်းအောင်ကျော်တို့နဲ့ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးမှ ဆုံးဖြတ်လိုက် တာ။ အဘသူတို့ကိုပြောတာက ဒီကိစ္စက အချိန်ကောင်း ပဲ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောသလိုဆိုရင် နိုင်ငံရေးကို နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ပဲ ဖြေရှင်းရမယ်။ ဒီလိုပြန်လာတာဟာ နိုင်ငံ ရေးနဲ့ဖြေရှင်းတဲ့လုပ်ရပ်ပဲ။ သို့လော သို့လောဖြစ်နေရင် တော့ အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး။ စစ်မှန်တဲ့ဖိတ်ခေါ်ခြင်း လို့ယုံကြည်တဲ့အတွက် အဘပြန်လာတယ်။ နယူးယောက် က သံအမတ်ကြီးကို ဒီကိစ္စတွေ တင်ပြတယ်။ စာရေးတယ်။ သုံးရက်အတွင်း ပြန်လာလို့ရပါတယ်လို့ အဘဆီကို စာပြန် လာတာပါ။
ရန်ကုန်တိုင်းမ်- အဘတို့ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား ညွန့်ပေါင်းအစိုးရက ဘယ်သူတွေများ ပြန်လာဖို့ရှိပါလဲ။
ဦးပီတာလင်းပင်- အဘက ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား ညွန့်ပေါင်းအစိုးရရဲ့ခေါင်းဆောင် ဒေါက်တာစိန်ဝင်းကို ခေါင်းဆောင်နေရာကိုရယူပြီး တာဝန်ယူစိတ်မရှိတဲ့လုပ်ရပ် တွေကြောင့် အယုံအကြည်မရှိဘူးဆိုပြီး အိတ်ဖွင့်ပေးစာ ပေးခဲ့ပါတယ်။ သူက တိုင်းရင်းသားအရေးတွေလဲ ၀င် ရောက်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမရှိတာလဲပါတယ်။ အခု ကိစ္စတွေ ကိုလဲ ဦးစိန်ဝင်းရော၊ ကိုလှတင်ရော မီဒီယာမှာဖြေတာတွေ က အရေးပါတဲ့အရာတွေမပါဘူး။ ဒေါ်စုရယ်၊ ဘယ်သူရယ် ဘယ်နှခေါက်၊ ဘယ်နေရာတွေမှာတွေ့တယ်ဆိုပြီး လျှောက် ပြောထားတယ်။ အဘကတော့လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေ မှန်တယ် ဆိုရင်ထောက်ခံမယ်။ အရင်ကတော့ တစ်ဦးတစ်ယောက် တည်းချုပ်ကိုင်တဲ့စနစ်ကနေ အခုတော့ ပြောင်းသွားပြီ။ ဒီပြောင်းသွားတဲ့စနစ်ကို အဘအနေနဲ့ အောင်မြင်မယ်လို့ အဘယုံတယ်။ အဘ အမေရိကားမှာနေတော့ မြန်မာ ပြည်က ဂျာနယ်တွေကို ဖတ်ရတယ်။ လာဘ်စားတဲ့လူတွေ ကို ဖမ်းတယ်ဆိုတာတွေ တွေ့ရတယ်။ ရန်ကုန်မြို့တော် မှာဆိုလဲ ပြောင်ပြောင်ရောင်ရောင်မရှိဘူး။ ဒီက သက်ဆိုင် ရာတာဝန်ရှိသူတွေကို ဒီအဖြစ်အပျက်တွေမေးကြည့် တော့ သူတို့က အခုတက်လာတဲ့ မြို့တော်ဝန်ကတော့ အင်မတန်တော်ပါတယ်။ မကြာခင်မှာ ရန်ကုန်မြို့ကြီးက ပြောင်းလဲသွားပါမယ်လို့ ဖြေကြတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်းမ်- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အစိုးရတို့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးနေတာတို့၊ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးကိုဆောင် ရွက်နေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
ဦးပီတာလင်းပင်- တိုးတက်တာတွေ အများကြီးရှိလာတယ်လို့ အဘမြင်ပါတယ်။ အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူး။ အများ အားဖြင့် ရှေ့ကိုတက်နေပြီဆိုတာ အဘယုံတယ်။ ရှေ့ တက်ဖို့မှာ အဓိကလိုအပ်ချက်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောဖူးတဲ့ “ပြည်သူတွေဟာ သူတို့နဲ့တန်တဲ့အစိုးရကို ရ တယ်” ဆိုသလို ပြည်သူတွေကလဲ ပါဝင်ပတ်သက်ရမယ်။ စောင့်ကြည့်လို့မရဘူး။ အဘတို့ အတိုက်အခံနိုင်ငံရေး လောကမှာ စောင့်ကြည့်ဦးမယ်ဆိုတာ ပြောနေကြတယ်။ အဘပြောချင်တာက စောင့်ကြည့်လို့မရဘူး။ လက်တွေ့လုပ် ရမယ်။ ဒါဖြင့်ရင် ၀င်ပါရမယ်။ မကြိုက်ရင် နောက်ဆုတ် လိုက်။ အဲလိုမလုပ်ဘဲနဲ့ စောင့်ကြည့်ဦးမယ်၊ စောင့်ကြည့် ဦးမယ်ဆိုတာ ဘာမှအကျိုးမရှိဘူး။ အဘ ဒီကိုလာခါနီးမှာ အစည်းအဝေးမျိုးစုံလုပ်ခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံး အစည်းအဝေး တစ်ခုမှာ ဝေဖန်တဲ့လူတွေကိုတွေ့ရပြန်တော့ အဘက “ခင်ဗျားတို့ သတ္တိဘယ်လောက်ရှိလဲ”လို့ မေးလိုက်တယ်။ ခင်ဗျားတို့က ဝေဖန်ရုံသက်သက်ပဲ၊ သတ္တိမရှိဘူး။ ကျွန်တော် က လက်တွေ့ပဲ။ လက်တွေ့ဖြစ်ဖို့က သတ္တိရှိရမယ်။ စွန့်ရ မယ်။ ယုံကြည်ချက်ရှိရမယ်။ တချို့က ရှေ့ကိုမတက်တဲ့အ ဖျက်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ အချိန်ကုန်နေတယ်။ လူတစ်ယောက် မှားနေတယ်ဆိုရင် ဘာမှားနေတယ်ဆိုတာ ထောက်ပြရ မယ်။ အဘ အရင်တုန်းက အမြဲဆန္ဒပြတယ်။ အခုကျ တော့ ဆန္ဒပြစရာမလိုတော့ဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ ဦးအောင်ကြည်တို့ ပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာ ပြည်သူ့ ဆန္ဒဆိုတာ နံပါတ် (၁)က ပါနေတယ်။ ရှေ့ကိုတက်ချင် တယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည်သူတွေအားလုံးစုပေါင်းပြီး လက် တွေ့လုပ်ဆောင်မှရမယ်။ မြန်မာလူမျိုးအများစုက လက် ဖက်ရည်ဆိုင်မှာစကားပြောနေတာ များနေတယ်။ လေနဲ့ပဲ အလုပ်လုပ်နေတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အောင် မြင်တယ်ဆိုတာ စွန့်ရဲတယ်။ တစ်စိုက်မတ်မတ် သူ့ယုံကြည် ချက်ကို လုပ်ရဲတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရတော့ ကိုယ့် ကို နေရာမပေးဘူးဆိုရင် ဘာလုပ်မလဲ။ အဲဒီလူ အုပ်ချုပ် နေတဲ့နေရာမှာ မနေဘူးဆိုပြီး အဘ တောခိုလာတာ။ အဘယုံကြည်တာ နောက်တစ်ခုက တိုင်းရင်းသားရင်ကြား စေ့ရေးကိစ္စတွေကို ပြန်တည်ဆောက်လိုပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း များစွာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကို ပြန်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ လူတိုင်း ပါဝင်ပတ်သက်ရမယ်။ သန်း ၆၀ကျော်ရှိတဲ့မိသားစုကြီး ညီညီညွတ်ညွတ်နေနိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်းမ်- အဘအနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ရော အစိုးရအဖွဲ့ထဲက အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးတွေနဲ့ရောတွေ့ဖို့ ရှိပါသလား။
ဦးပီတာလင်းပင်- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဖို့ စီစဉ်ထား ပါတယ်။ တွေ့တာကတော့ အကုန်လုံးနဲ့တွေ့မှာပါ။ အဘက ပါတီ နိုင်ငံရေးတော့ လုပ်ဖို့မရှိပါဘူး။ လူမှုရေးပဲ လုပ်မှာပါ။ တိုင်း ရင်းသားတွေနဲ့ အစိုးရကြားမှာ တတ်နိုင်သမျှ လုပ်မှာပါ။ အဘရွေးကောက်ပွဲမှာ တစ်သီးပုဂ္ဂလအမတ်အနေနဲ့ အ ရွေးခံရတာက လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်လို့ အရွေးခံ ရတာ။
ရန်ကုန်တိုင်းမ်- လက်ရှိနိုင်ငံရေးကို ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ လုပ် ဆောင်ဖို့ရှိပါသလဲ။
ဦးပီတာလင်းပင်- အဘက တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အစည်းတွေနဲ့ရင်းနှီးခဲ့တာဆိုတော့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရေးကိုဦးတည်ပြီး လုပ်ဆောင်ပါမယ်။ ပြီးတော့ တိုင်းပြည် ဖွံဖြိုးရေးကိုလဲ လုပ်ဆောင်ပါမယ်။
ရန်ကုန်တိုင်းမ်- နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးက တိုင်းရင်းသားလက် နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကို ငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်တာလဲ ရှိပါ တယ်။ အဘကလဲ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ဆိုတော့ အဲဒီအကြောင်းအရာကိုများ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ အစည်းတွေနဲ့ဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့လားဆိုတာ သိပါရစေ။
ဦးပီတာလင်းပင်- အဘက ငါးဦးကော်မတီမှာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆို တော့ အဘတို့ငါးဦးက အပတ်စဉ် အွန်လိုင်းမှာ စကိုက်ဗ် နဲ့ဆက်သွယ်ပြီး ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ကြတယ်။ ဒီငြိမ်းချမ်း ရေးဖိတ်ခေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး အဘလဲထောက်ခံသလို သူတို့ကလဲ ထောက်ခံကြပါတယ်။ အဲဒီမှာ ဘာဖြစ်လဲဆို တော့ အရင်တုန်းက အဲဒီလိုလုပ်ပြီးသွားရင် ပြန်ပျက်သွား တယ်ဆိုတဲ့အစဉ်အလာကရှိနေတော့ ယုံကြည်မှုက နည်း နေတယ်။ ယုံကြည်မှုများလာအောင် အဘတို့က ကိုယ့် ဘက်က လျှော့ပေးရမယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေကို မောက် မောက်မာမာဆက်ဆံလို့မရဘူး။ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးနဲ့ မိသား စုပုံစံဆက်ဆံမယ်ဆိုရင်တော့ အောင်မြင်မှာပါ။ ရင်ထဲက လာတဲ့အသံနဲ့ မေတ္တာနဲ့ဆက်ဆံရင်တော့ အောင်မြင်မှုရ မှာပါ။
ရန်ကုန်တိုင်းမ်- အဘတာဝန်ယူခဲ့တဲ့ငါးဦးကော်မတီမှာ ကေ အင်န်ပီပီတို့ အင်န်အမ်အက်စ်ပီတို့ ကေအင်န်ယူတို့က ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ ပါပါတယ်။ ဒီခေါင်းဆောင်တွေက အဘ မြန်မာပြည်ပြန်လာတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာများ ပြောဆိုကြလဲမသိဘူး။
ဦးပီတာလင်းပင်- မြန်မာပြည်ပြန်လာဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အဘက ပြန်ဝင်လာတာ၊ ပြန်မ၀င်လာတာ အသာထား။ ထောက်ခံဖို့ပြောတယ်။ ဒီကိုပြန်လာတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက် ပြီး ဂျာမနီက ဦးနွယ်အောင်၊ ကိုမိုးသီးဇွန်၊ ကိုထွန်းအောင် ကျော်တို့နဲ့ညှိနှိုင်းပြီး ပြန်ဝင်လာတာပါ။
ရန်ကုန်တိုင်းမ်- အဘနဲ့ညှိနှိုင်းခဲ့သူတွေကို ဆက်လိုက်ပါလာဖို့ ရှိပါလား။
ဦးပီတာလင်းပင်- သူတို့က ပြန်ဝင်လာဖို့အသင့်ပါပဲ။ ဒီဘက်က ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်နိုင်ရင် ပြန်ဝင်လာကြမှာပါ။ အဘက ဦးဆုံးဝင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အောင်မြင်မယ် ဆိုရင် သူတို့ပြန်လာကြမှာပါ။ အဘက မကြောက်မရွံနဲ့ ပြန်လာတော့ တာဝန်ရှိသူတွေက အဆင်ပြေအောင်ထား ပေးထားတယ်။ ကိုယ်သွားချင်တဲ့နေရာသွားအနောက်က လိုက်တာမရှိဘူး။ အဘက အမေရိကားက ပထမဆုံးပြန် လာသူဆိုတော့ အကုန်လုံးက ၀မ်းသာအားရ ကြိုဆိုကြပါ တယ်။ အစကောင်းနေတော့ နောက်အလားအလာက ကောင်းဖို့ရှိပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်းမ်- အမေရိကန်က မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ကို စီးပွား ရေးပိတ်ဆို့မှုကို သက်တမ်းတစ်နှစ်တိုးလိုက်ပါတယ်။ အဘ အနေနဲ့လဲ အမေရိကန်ကွန်ဂရက်က ဆီနိတ်တာတွေနဲ့ ပတ်သက်မှုတွေရှိခဲ့တော့ အဲဒီဆီနိတ်တာတွေကတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံကို လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအ ညီတွေရရှိအောင်ကူညီဖို့အစီအစဉ်များ ရှိပါသလား။
ဦးပီတာလင်းပင်- လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေရရှိအောင် အဘတတ်နိုင်သမျှ ကူညီဖို့ရှိပါတယ်။ပြီး တော့ အဘအနေနဲ့က စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကို လက်မခံခဲ့ပါ ဘူး။ ထောက်လဲ မထောက်ခံပါဘူး။ ဆန်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပထမဆုံးအကြိမ်အစည်းအဝေးလုပ်တော့ အဘသွား တက်တယ်။ ဦးသွင်မြင့်ဦးတို့လုပ်တဲ့ပွဲ၊ အဲဒီမှာ အဘပြော တာက ဆန်ရှင်လုပ်မယ်ဆို တပ်မတော်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်း တွေကို ဆန်ရှင်လုပ်၊ စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကို ဆန်ရှင် လုပ်၊ ကျန်တာဆန်ရှင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ မထောက်ခံ ဘူး။ ဆန်ရှင်လုပ်ရင် တပ်မတော်ထိခိုက်မယ်ဆိုတဲ့အစား ပြည်သူတွေကိုသာထိခိုက်မယ်။ အလုပ်လက်မဲ့တွေပိုများ လာမယ်။ ဒီမိုကရေစီဆိုတာဖွင့်တာ။ ပိတ်တာမဟုတ်ဘူး။ အဘပြောတဲ့အတိုင်း တိုင်းတစ်ပါးက အဘတို့ကိုဒုက္ခပေး တာပဲလုပ်မယ်။ ဘယ်နိုင်ငံမှ တကယ်ကူညီဖို့မရှိဘူး။ ဒါက အဘအနှစ် ၂၀ကြုံလာတာ။ အခုလုပ်နေတဲ့ညီညွတ်ရေး ကိစ္စတွေကို ၀င်ရှုပ်နေတဲ့သူတွေက သူတို့ရနေတဲ့အထုပ် ပျောက်သွားမှာစိုးရိမ်လို့ လိုက်ဖျက်နေတာ။ အဘ သမ္မတ ကြီးကိုရေးတဲ့စာမှာလဲ ကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စ တွေကို နိုင်ငံရေးအမြတ်ထွက်ချင်နေတဲ့သူတွေက လိုက်ဖျက် နေတယ်လို့ပါတယ်။ အဘတို့ နိုင်ငံရေးလုပ်တာက မကြိုက်ရင်အော်မယ်။ ကန့်ကွက်မယ်။ မှန်ရင်ထောက်ခံ မယ်။ အခုအစိုးရလုပ်နေတာတွေက ကောင်းတယ်။ လွှတ် တော်ပြန်ခေါ်တယ်။ လွှတ်တော်မှာလဲ အရင်တုန်းက ပြောပိုင်ခွင့်မရှိတာတွေပြောတယ်။ ဥပဒေတွေ ပြင်ဆင် ရေးဆွဲနေတယ်။ အကျဉ်းထောင်မှာရှိတဲ့ အကျဉ်းသား ၂၀၀၀ကျော်အတွက် လုပ်နေတာတွေရှိတယ်လို့ အဘကို သူတို့က ပြောကြတယ်။၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဦးဝင်းတင်ပြောတာက ပြောင်း လဲမှုတွေလုပ်ရမယ်လို့ပြောတယ်။ အဲဒါကို တချို့က အ ကုန်လုံးပြောင်းရမယ်ဆိုတာကတော့ အိမ်ကြီးက ပြီးနေ ပြီ။ အဲဒီပြီးနေတဲ့အိမ်ကြီးက တံခါးမကောင်းရင် တံခါး ဖျက်ပေါ့။ လှေကားမကောင်းရင် လှေကားပြင်ဆိုတာကို အိမ်ဖျက်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ ဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲ။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေက တချို့ဟာတွေတော့ ပြင်ရမယ်။ တပ်မ တော်အာဏာတည်အောင် ၂၅ရာခိုင်နှုန်းယူထားတာကို တော့ အဘလက်မခံဘူး။
ရန်ကုန်တိုင်းမ်- အဘက တပ်မတော်မှာလဲ စစ်ဆေးရေးကိစ္စ ရပ်တွေမှာ တာဝန်ယူတယ်ဆိုတာ သိရပါတယ်။ အခုလဲ တပ်မတော်မှာ ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာ လဲသိရတဲ့အတွက် ဒီတော့ အဘအနေနဲ့ တပ်မတော်ကြီး ကို ဘယ်လိုမျိုးများဖြစ်စေချင်လဲမသိဘူး။
ဦးပီတာလင်းပင်- အဘက ပြည်သူ့တပ်မတော်ဖြစ်စေချင်တာ ပေါ့။ အဘိုး ဒေါက်တာသိန်းမောင်က ပထမဆုံးသံအမတ် ကြီး၊ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ကို ဖွဲ့စည်းဖို့ကြိုးစားခဲ့တာ။ အင်္ဂလိပ် လက်ထက်မှာ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တာ။ နောက်လေးနှစ်မှာတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ သခင် သန်းထွန်းက အငယ်ဆုံးဝန်ကြီးအဖြစ်ပါခဲ့တာ။ အဘတို့ ရဲ့ရာဇ၀င်မှာ ထိုင်ပြီးရင် မထချင်တဲ့သူတွေများတယ်။ အခုဆို အဘတို့နိုင်ငံမှာ ဒီလိုမျိုးတွေမရှိတော့ပါဘူး။ ဒီလို ဖြစ်လာတာကို အဘလဲ ကြိုဆိုတယ်။ ထောက်ခံတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်းမ်- အဘက လင်းပင်မင်းသားကြီးရဲ့မြစ်တော်ဆို တာသိရတော့ အဘတို့မိသားစုဆင်းသက်လာပုံလေးကို ပြောပြပေးပါလား။
ဦးပီတာလင်းပင်- ကနောင်မင်းသားကြီးရဲ့သားက လင်းပင်မင်း သား၊ လင်းပင်မင်းသားရဲ့သားက အဘအဘိုး၊ အဘအ ဘိုးနဲ့ ယောအတွင်းဝန်ဦးဘိုလှိုင်ရဲ့သမီးနဲ့ ရတာ။ အမေ ရဲ့အဖေက ခုနကပြောတဲ့ ဒေါက်တာသိမ်းမောင်။ ဒေါက် တာသိမ်းမောင်က တိုင်းတာမင်းကြီးရဲ့မြေး၊ အမြောက် ၀န်ရဲ့သမီး၊ တိုင်းတာမင်းကြီးမှာ အမြောက်ဝန်နဲ့ရောက် စောက်ဆိုတဲ့သား နှစ်ယောက်ရှိတာ။ အဘတို့က အမြောက်ဝန်နဲ့အမျိုးစပ်တာ။
ရန်ကုန်တိုင်းမ်- အဘရဲ့မိသားစုကော အမေရိကားမှာ ကျန်ခဲ့ လားခင်ဗျာ။
ဦးပီတာလင်းပင်- အဘက မြန်မာပြည်ကသွားကတည်းက တစ်ယောက်တည်းထွက်သွားတာ။ အဘ ဟိုမှာ ၂၁နှစ် ကျော်နေတာ။ အဘက နိုင်ငံရေးလုပ်မယ်ဆိုတော့ မိသား စုမခေါ်သွားဘူး။ အခုကျတော့အဲလိုမဟုတ်ဘူး။ မိသားစုပါ တစ်ပါတည်းခေါ်လာကြတယ်။ ကိုစိန်ဝင်းတို့ဆို မိသားစုပါ တစ်ပါတည်းခေါ်လာတာ။ အဘရဲ့မိသားစုက အမေရိကား မှာမရှိဘူး။ မြန်မာပြည်မှာပဲရှိတာ။ ပြင်ဦးလွင်မှာရှိတယ်။ အဘက အမေရိကန်နိုင်ငံသားလည်း မခံယူထားဘူး။ နေ ထိုင်ခွင့်ရပြီး အဲဒီဟာနဲ့ပဲ ကူးလူးဆက်ဆံနေတာ။
ရန်ကုန်တိုင်းမ်- ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေက တိကျတဲ့နည်း ဥပဒေတွေ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာတွေမရှိလို့ပြန်လာဖို့ နှောင့် နှေးနေတယ်ဆိုတဲ့စကားသံတွေကြားနေရပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဘက ဘယ်လိုများသုံးသပ်မိလဲခင်ဗျာ။
ဦးပီတာလင်းပင်- ဥပဒေတစ်ခုထုတ်ပြန်ရတာ အချိန်ကြာပါ တယ်။ အဲဒီဥပဒေကိုရေးဆွဲနေတာလည်းကြားပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကိုပြန်လာချင်ရင် မြန်မာသံရုံးနဲ့ဆက်သွယ်ရမယ် လေ။ ဒါကနည်းမှန်လမ်းမှန်ပဲလေ။ အဘလာတာက သံအ မတ်ကြီးကနေ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး၊ ၀န်ကြီးကနေ သမ္မတ ကြီးဆီကိုစာပို့တယ်။ ဒါကနည်းမှန်လမ်းမှန်လေ။ ပြီးတော့ ပြန်လာမယ်ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ပြီး အဘပြန်လာတယ်။ ဒီလို နည်းမှန်လမ်းမှန်ကို မဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့သူတွေကတော့ ပိုင် ဆိုင်မှုတွေရှိမယ်။ စားလို့ကောင်း၊ သောက်လို့ကောင်း၊ ၀င်ငွေတွေရှိနေတဲ့သူတွေပါ။ အဘတို့က လူငယ် တွေကို ဦးစားပေးရမှာပါ။ လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကိုယ့်ထက် သန်စွမ်းတဲ့လူငယ်တွေကို တင်ပေးနိုင်ရင် တိုင်းပြည်အနာ ဂတ်ကောင်းလာမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်းမ်- အန်အယ်လ်ဒီအနေနဲ့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက် ပွဲမှာပါတီတစ်ခုအနေနဲ့မှတ်ပုံတင်ဖို့ ရှိ၊ မရှိဆိုတဲ့အပေါ် မှာ အဘအမြင်ကို သုံးသပ်ပေးပါ။
ဦးပီတာလင်းပင်- အန်အယ်လ်ဒီရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်ဖို့ မှတ်ပုံ တင်လည်းမထားဘူး။ အကောင်းဆုံးကတော့ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်က နောက်ပိုင်းမှာ အသက်က ၇၀၊ ၈၀လောက် ရှိလာပြီ၊ တိုင်းရေးပြည်ရေးနဲ့ ပါတီရေးကို အဓိကမထား ရင် ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်။
ရန်ကုန်တိုင်းမ်- နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးက အဘကို တိုင်းရင်း သားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဆီသွားပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး စကားဆိုခိုင်းရင် အဘသွားဖို့အသင့်ရှိပါလားခင်ဗျာ။
ဦးပီတာလင်းပင်- သမ္မတကြီးက သွားခိုင်းရင်သွားဖို့ အသင့်ရှိ ပါတယ်။ သမ္မတကြီးကရော တချို့အရာရှိတွေကော စိတ် ကောင်းစေတနာရှိတာများတယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေမှာ လည်း စိတ်ကောင်းစေတနာရှိတာများပါတယ်။ တချို့အရာ ရှိတွေက လေးစားမှုမရှိပါဘူး။ နှစ်ပေါင်းများစွာတိုက်ခိုက် လာတဲ့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကို သားအရွယ် လေးတွေက ဟောက်လား၊ ဟိန်းလားတွေရှိတော့ ပြည်သူ ကိုစော်ကားနေတာနဲ့အတူတူပဲ။ ပြည်သူကိုမစော်ကားဘဲ နဲ့ ပြည်သူ့အာဏာကိုတည်ဆောက်ပေးနိုင်ရင် ကောင်း မယ်။ အခုလည်း တော်တော်များများပြောင်းလဲလာပြီလို့ ထင်ပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်းမ်- ဘယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အ စည်းက ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုအလျင်အမြန်ရချင်နေ လဲ ခင်ဗျာ။
ဦးပီတာလင်းပင်- တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတော်တော်များ များက သေသေချာချာလုပ်ရင် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကို လုပ်နိုင်တယ်။ ချင်းအဖွဲ့ကျတော့ နည်းနည်းခက်မယ်ထင် တယ်။ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေကတော့ ဒီအချိန်ဟာအ ကောင်းဆုံးအခြေအနေဆိုတာသိသင့်တယ်။ ဒီတော့ သူ တို့တွေက လက်ရှိအခြေအနေကို အမိအရ ဆုပ်ကိုင်သင့် တယ်။ တချို့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေက အရည် အသွေးအားနည်းတော့ အပြုရယ်၊ အပျက်ရယ်မှာ အပျက် ဘက်ကိုဘဲ ဦးတည်စဉ်းစားနေတယ်။ ဒီတော့ သူတို့က သတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ကို စဉ်းစားနေတယ်။ အတွေးအခေါ်အမြော် အမြင်တတ်တဲ့သူကတော့ သေနတ်ရှိရင် ကာကွယ်ဖို့ကိုပဲ တွေးတယ်။ ဒီတော့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရအောင် အဘ တို့မိသားစုစိတ်ဓာတ်နဲ့လုပ်မှရမယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေက ရိုးသားမှုရှိတော့ အဘတို့က အပေါ်စီးကနေ လုပ်လို့မရ ဘူး။ အောက်ကနေသွားမှ ရမယ်။
ရန်ကုန်တိုင်းမ်- မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ကို အီးယူရဲ့သဘောထား ကပြောင်းလဲသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ အမေရိကန်ကတော့ ပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့အပြင် တုတ်တစ်ဖက်၊ မုန်လာဥတစ်ဖက် ဆိုတဲ့မူကို ဆက်ကိုင်ထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အစိုးရ သစ်ပြောင်းလဲသွားပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ဆောင် နေခြင်းအပေါ် အမေရိကန်က ဘယ်လိုသဘောထားသလဲ ဆိုတာ အဘအနေနဲ့ အနီးစပ်ဆုံး သုံးသပ်ပြပေးစေချင် ပါတယ်။
ဦးပီတာလင်းပင်- အဘက အမေရိကန်ရှဲ့အအေနီနစမေအာနညအ နဲ့ခင်တယ်။ အဘသိသလောက်ပြောရရင် အမေရိကန် ကိုလည်း တို့မီး၊ ရှို့မီးလုပ်နေတဲ့သူတွေများတယ်။ အဲဒီ ကောင်တွေက သူတို့လည်းစားရအောင်၊ ဟိုကောင်လည်း စားရအောင်လုပ်နေတာတွေရှိတယ်။ အင်န်ဂျီအိုကို ဒေါ်လာတစ်သန်း ထုတ်ပေးရင် ဖြတ်စား၊ လာဘ်စားလုပ် တာနဲ့ တကယ်လုပ်တဲ့ကောင်က နည်းနည်းပဲရတယ်။ အဲလို ဖြတ်စားတဲ့ကောင်တွေက ဘယ်ပြီးချင်မလဲ။ ဒါကြောင့် အဘ သမ္မတကြီးဆီကိုပေးတဲ့စာမှာ အတ္တသမားတွေက အနှောင့်အယှက်ပေးနေတယ်လို့မြင်တယ်လို့ ထည့်ရေး ထားတာ။ အဲဒီလိုစားပေါက်ရှိနေတဲ့ကောင်တွေက အဘတို့ လုပ်ငန်းတွေကို ဖျက်စီးဦးမှာပဲ။
ရန်ကုန်တိုင်းမ်- အဲဒီလိုအနှောင့်အယှက်ပေးနေတဲ့သူတွေကို ဘယ်လိုနည်းမျိုးနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ အဘထင်ပါသလဲ။
ဦးပီတာလင်းပင်- အဘ အင်္ဂလန်ရောက်တုန်းက ဗမာ့အရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ရဲ့ပွဲတစ်ပွဲကို သခင်သာခင်ရဲ့မြေးဆရာဝန် နဲ့ရောက်သွားတာ။ အဲဒီအဖွဲ့မှာ ဗမာတစ်ယောက်မှမပါဘဲ နဲ့ လှုပ်ရှားမှုလုပ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ ဒီလိုအနှောင့်အ ယှက်ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကို ပြည်သူတွေသိပါတယ်။အဘအနေနဲ့ အဲဒီအဖွဲ့တွေရဲ့မူတွေကိုပဲ မကြိုက်တာပါ။ လူတွေကိုတော့ မုန်းတီးတာတွေမရှိပါဘူး။
9/27/2011 11:31:00 PM
NLD ၂၃ နှစ်မြောက် (ဓါတ်ပုံ သတင်း)
9/27/2011 01:38:00 PM
20.09.2011 - Saffron Generation
မြန်မာပို့စ်ဂျာနယ် Vol.3, No.37
9/27/2011 11:34:00 AM
လွတ်လပ်စွာ ဆန္ဒပြခွင့် ဥပဒေမူကြမ်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ရှင်းပြ
ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့က တင်သွင်းထားတဲ့ ပြည်သူတွေ ငြိမ်းချမ်းစွာ စုရုံးဆန္ဒပြခွင့်ဆိုင်ရာ ဥပဒေမူကြမ်းကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုကိုက ဒီကနေ့ နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှာ လာရောက် ရှင်းပြခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ (Photo: AFP/MRTV 4)
ဒီမူကြမ်းအတွက် ပြင်ဆင်ချက် အဆိုတင်သွင်းမှုကို အခုလ၂၉ နေ့အထိ နောက်ဆုံးရက် သတ်မှတ် ထားတယ်လို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးကြည်မြင့်က RFA ကို ပြောပါတယ်။
“ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခွင့်နှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်း လှည့်လည်ခွင့် ဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်း ကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို ဥပဒေကြမ်း ကော်မတီ ဥက္ကဌ သို့မဟုတ် ဥက္ကဌက တာဝန် ပေးအပ်သူက ဖတ်ကြား ရှင်းလင်းခြင်း။ လွှတ်တော်က ဆွေးနွေး စဉ်းစားရန် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဥပဒေကြမ်းကို ရှင်းလင်းမည့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ အမည်စာရင်း တင်သွင်းနိုင်ကြောင်း အဲဒါကို ကြာသပတေးနေ့ အထိ လေးရက် ခွင့်ပြုထားတယ်”
ဒီဥပဒေဟာ ပြည်သူ တရပ်လုံးရဲ့ ဒီမိုကရေစီ အခွင့်အရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အတွက် အင်မတန် အရေးကြီးတယ်လို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းညွန့်က ပြောပါတယ်။
ဒီကနေ့ (၃) နာရီကြာ ကျင်းပတဲ့ အမျိုးသား လွှတ်တော်မှာတော့ ဒေါက်တာ မြတ်ဉာဏစိုး တင်သွင်းတဲ့ နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေ အတွက် အနိမ့်ဆုံး လစာ သတ်မှတ်ရေး အဆိုကို ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မနက်ဖြန် ကျင်းပမယ့် အမျိုးသား လွှတ်တော် ဆွေးနွေးပွဲမှာ ရပ်ကွက်ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ခန့်ထားရေး ဥပဒေကို ဆွေးနွေးဖွယ် ရှိတယ်လို့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေက ပြောပါတယ်။
9/26/2011 11:24:00 PM
ပထမဆုံး ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KIA)၏ တပ်ရင်းတစ်ခုအား မြန်မာစစ်တပ်မှ
စက်တင်ဘာ (၂၅)၊ တနင်္ဂနွေနေ့ ညနေပိုင်းတွင် သိမ်းပိုက်လိုက်သည်။
လွယ်ကန်ဌာနချုပ် KIA တပ်မဟာ (၄) အောက် ဗိုလ်မှူး မခေါလရိန် ဦးစီးသည့် ဒတ်နိုင်း အခြေစိုက် KIA တပ်ရင်း (၉) အား မကွေး တပ်မ(၈၈)နှင့် မိတ္ထီလာ တပ်မ(၉၉)မှ နှစ်ရက်ကြာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထိုးစစ်ဆင်ပြီး သိမ်းယူလိုက်သည်ဟု တပ်မဟာ (၄) KIA အရာရှိများပြောသည်။
နှစ်ရက်ကြာတိုက်ပွဲတွင် KIA မှ ဗိုလ်တစ်ဦးနှင့် စစ်သားတစ်ဦးတို့ အစိုးရတပ် အမြောက်ဆံထိမှန် ကျဆုံးခဲ့ကြောင်း KIA အရာရှိများ ဆိုသည်။
အစိုးရစစ်တပ်ဘက်မှ ဒါဇင်နှင့်ချီ ကျဆုံးပြီး (၁၀၀) ခန့် ဒဏ်ရာရရှိကြသည်ဟု ရှေ့တန်းမှ KIA အရာရှိများပြောသည်။
၁၂၀ မမ အမြောက်ကျည်များ ဆက်တိုက်ပစ်ခတ်မှုကို မခံနိုင်သောကြောင့် ဒတ်နိုင်း
(KIA တပ်ရင်း (၉) အခြေစိုက်စခန်း)မှ KIA တပ်ဖွဲ့များ ဆုတ်ခွာပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု KIA အရာရှိများပြောသည်။
တနင်္ဂနွေနေ့ မှာပဲ နမ္မတူအနီး အခြေစိုက် KIA တပ်ရင်း (၈) နှင့် အစိုးရစစ်ကြောင်းများ မံတုံမြို့နယ်ခွဲ နမ်ဟိုင်းအနီးတွင်လည်း ပြင်းထန်သည့်တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ယင်းတိုက်ပွဲတွင် KIA တပ်သား ၅ ဦးကျဆုံးပြီး အစိုးရဘက်တွင် အများအပြား ကျဆုံး ထိခိုက် ဒဏ်ရာရရှိမှုရှိသည်ဟု တပ်ရင်း (၈) သတင်းရပ်ကွက်က ဆိုသည်။ တိုက်ပွဲများ ဆက်ဖြစ်နေကြောင်း သိရသည်။။
စက်တင်ဘာ ၂၄၊ စနေနေ့ကစပြီး အင်အား
၁၀၀၀ ကျော်ပါဝင်သည့် မြန်မာစစ်တပ် တပ်မနှစ်ခုနှင့် KIA ကြား KIA တပ်မဟာ (၄) ပတ်ဝန်းကျင် တပ်ရင်း၂၊ တပ်ရင်း ၈ နှင့်တပ်ရင်း ၉ နေရာများတွင် ဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်သည်။
KIA တပ်ရင်း (၉) ကျရှုံးသွားပြီးနောက်ပိုင်း ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတွင် တိုက်ပွဲများ ပိုမို ကျယ်ပြန့် ပြင်းထန်လာမည်ဟု KIA အရာရှိများပြောသည်။
စစ်ပွဲများကြောင့် တရုတ်နယ်စပ် မုန်းကို သို့ တိမ်းရှောင်လာကြသည့် ကချင်၊ ရှမ်းနှင့် အခြား စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များကို တရုတ်နိုင်ငံဘက် မ၀င်လာရန် တရုတ်စစ်သားနှင့် နယ်ခြားစောင့်တပ်များက တားမြစ် စောင့်ကြပ်နေကြောင်း မုန်းကို ဒေသခံများပြောသည်။
9/26/2011 11:11:00 PM
ဆုတောင်းသူများ ရဲအင်အား ၄၀၀ ခန့်ကတား
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ရွှေဝါရောင် သံဃာ့လှုပ်ရှားမှု လေးနှစ်ပြည့်အဖြစ်
ဆူးလေဘုရားတွင် ဝတ်ပြုဆုတောင်းပွဲ သွားရောက်သူ ၂ဝဝ ခန့်ကို လုံထိန်းနှင့် ရဲအင်အား ၄ဝဝ ခန့်က တနင်္လာနေ့တွင် တားဆီးကာ လူစုခွဲလိုက်သည်။ဒဂုံမြို့သစ်
အရှေ့ပိုင်းမှ ဆူးလေသို့ ခြေလျင်ချီတက်လာသူများကို မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ စာတိုက်မှတ်တိုင် အနီးရှိ မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒရုံးရှေ့တွင် ရဲအင်အား ၄ဝဝ ခန့်က တားဆီးခဲ့ကာ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ရဲမှူး ဦးမောင်စိုးက တည်ဆဲဥပဒေဖြင့်
အရေးယူနိုင်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု ဦးဆောင်ပါဝင်သူတဦးဖြစ်သည့် ကိုဝေဋ္ဌုထံမှ သိရသည်။ "သူတို့က ဒီလက်ရှိ ဒီ ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေက ၃၅၄ အရ လွတ်လပ်စွာ စီတန်းခွင့်နဲ့ သွားလာခွင့် ရှိတယ် ဆိုတဲ့ ဥပဒေက လက်ရှိလွှတ်တော်မှာ အတည်ပြု ပြဋ္ဌာန်းဖို့ မဆုံးဖြတ်ရသေးဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ လက်ရှိ တည်ဆဲဥပဒေ ငါးယောက်ထက် ပိုမစုရ ဆိုတာနဲ့ ကျနော်တို့ကို ဖမ်းလို့ ရတယ်လို့ ပြောလာပါတယ်" ဟု ကိုဝေဋ္ဌုက ဆိုသည်။ လူစုခွဲမှုကို ဒေသစံတော်ချိန် ၁း၄၅ မိနစ်တွင် လူစုခွဲပေးခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ ဆူးလေစေတီတော်သို့
ဆုတောင်းပွဲ တက်ရောက်မည့်သူများမှာ ယခင်က မော်တော်ကားများဖြင့် သွားရောက်ရန် စီစဉ်ထားခြင်းဖြစ်ကာ ကားမောင်းသူများအား ကားဘီးခွန် (Wheel Tax) နှင့် ယာဉ်မောင်း လိုင်စင်များ သိမ်းဆည်း၍ သွားမရရန် တားဆီးခဲ့ရာမှ ခြေလျင် သွားရောက်စဉ် ထပ်မံ တားမြစ်ခံရခြင်း ဖြစ်သည်။ “ကားသမားတွေကို
သူတို့ ဝှီးတက်ခ်တွေ၊ သူတို့လိုင်စင်တွေ သိမ်းပြီးတော့ ကားသမားတွေကို လိုက်လို့ မရအောင် ပထမဆုံး တားဆီးတယ်။ အဲဒီမှာတင် ကျနော်တို့ အုပ်စုတွေက ကားငှားလို့ မရဘူးဆိုရင် ကျနော်တို့ဟာ ကျနော်တို့ ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ စီတန်းပြီးတော့ လမ်းလျှောက်မယ်လို့ ပြောတယ်။ အဲဒီအတွက် ကျနော်တို့ကို ကြိုးတံတား ဒီဘက်ကနေ လမ်းလျှောက်တဲ့ အချိန်မှာ အဲဒီ စာတိုက်ရှေ့နားလည်း ရောက်ကော ကျနော်တို့ကို Block လုပ်ခံရတော့တာပဲ”ဟု ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်းမှ ဆူးလေဘုရားသို့ ချီတက်ရာတွင် ပါဝင်သူတဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။ ရွှေဝါရောင်
တော်လှန်ရေး လေးနှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် စီတန်းလှည့်လည်သူများ ကမ္ဘာအေး ဘုရားလမ်းပေါ် မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒရုံးချုပ် အနီး ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် မေတ္တာသုတ် ရွတ်ဆိုမှု ပြုလုပ်နေသည်ကို တွေ့မြင်ရစဉ် (ဓါတ်ပုံ မဇ္ဈိမ)
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ခြွင်းချက်မရှိ လွှတ်ပေးရေး၊ မြစ်ဆုံရေကာတာ တည်ဆောက်မှု ပြန်လည်သုံးသပ် ညှိနှိုင်း ရေးနှင့်
တိုင်းရင်းသားဒေသများရှိ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲများ ရပ်ဆိုင်းကာ အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးအတွက် ဆုတောင်းပွဲမှာ ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ကာ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒီမိုကရေစီအင်အားများ အလုပ်သမား အဖွဲ့များနှင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားမိသားစု အကျိုးဆောင်ကွန်ယက်တို့ စုပေါင်းပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။“ဒီကနေ့ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ် တည်ဆောက်ရေးကို ပိုမိုအားဖြစ်စေတဲ့ လှုပ်ရှားမှု တခုအဖြစ် လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှ ကျနော်တို့က အပျက်သဘော ဆောင်တဲ့ စိတ် မရှိပါဘူး။ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ စိတ်နဲ့ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဝတ်ပြုဆုတောင်းပွဲတွင် ပါဝင်ခဲ့သူတဦးက ဆိုသည်။ဝတ်ပြု
ဆုတောင်းသူများမှာ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဝတ်ပြုဆုတောင်းခြင်း ဖြစ်ကာ “နိုင်ငံရေး
အကျဉ်းသားများ ခြွင်းချက် မရှိ လွှတ်”၊ “စက်တင်ဘာ ရွှေဝါရောင် သံဃာ့လှုပ်ရှားမှု”၊ “ဧရာဝတီနိုင်ငံသားများ” စသည့် စာတန်းများ ပါဝင်သည့် အဝါရောင် အင်္ကျီများကို ဝတ်ဆင်ထားကြသည်။
အလားတူ ဆူးလေစေတီတော်တွင်လည်း ဒလမြို့နယ်ဘက်မှ ရောက်ရှိနေသူ ၄၀ ကျော်ခန့်ကိုလည်း ရဲမှူးအဆင့်ရှိ တာဝန်ရှိသူက ဝတ်ပြု ဆုတောင်းမှုကို ၁၅ မိနစ်သာ ပြုလုပ်ရန် ဖိအားပေးခဲ့၍ လူစုခွဲပေးခဲ့ရကြောင်း ဆုတောင်းပွဲတွင် ပါဝင်သူ တဦးထံမှ သိရသည်။“ဘုရားပေါ်မှာ ဆုတောင်းတာတို့ ဘာတို့လုပ်တာ
ဆိုရင် သူက ၁၅ မိနစ်ပဲ အချိန်ပေးပါမယ်လို့ ပြောလို့ ကျနော်တို့ ကလည်း ပြန်ပြောပါတယ်။ ကျနော်တို့က ဘုရားဖူးတာ၊ ဘုရားရှိခိုးတာ။ ဘုရားဝတ်ပြုတာက ကြာချင်လည်း ကြာမယ် ပြောတော့ မရဘူးတဲ့ သူက။ ၁၅ မိနစ်အတွင်းမှာ လူစုခွဲပေးပါလို့ ပြောပါတယ်” ဟု ကိုစိုးအောင်က ဆိုသည်။ နေ့လည် ၂း ၃ဝ ကျော်ခန့်တွင် လူစုခွဲခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယခင်က ဆူးလေဘုရားပေါ်တွင် ဝတ်ပြု ဆုတောင်းရန်အတွက် စောင့်ဆိုင်းသူ ၂၂ ဦးသာ ရှိသေးပြီး ထပ်မံပူးပေါင်း လာသူတချို့မှာ ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းမှ လာရောက်မည့် သူများနှင့် ပူးပေါင်းရန် သွားရောက်စဉ် တားဆီးမှုများ ရှိနေသည် ဆိုသည့် သတင်းကြောင့် ဆူးလေဘုရားသို့ လှည့်ပြန်လာကြသူများ ဖြစ်သည်။ ရွှေဂုံတိုင်လမ်းဆုံတွင်လည်း လုံထိန်းကား ၄ စီးခန့်ဖြင့် ပူးပေါင်းလာမည့် သူများကို တားဆီးရန် အတွက် အသင့်ပြင်ထားသည် ဟုလည်း သိရသည်။ လူစုခွဲရန်အတွက်
ဖမ်းဆီးမည်ကဲ့သို့သော ခြိမ်းခြောက်မှုများမရှိသော်လည်း မြို့တော်ခန်းမရှေ့တွင်မူ ရဲကား လေးစီး အပြည့်ဖြင့် လုံခြုံရေး ချထားသည့် အတွက် မူလ အစီအစဉ်ဖြစ်သည့် မြို့တော်ခန်းမရှေ့ ဆန္ဒပြရန်ကိုပါ ဖျက်သိမ်းခဲ့ရသည်ဟု သိရသည်။
သံဃာ့လှုပ်ရှားမှု လေးနှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ဆူးလေဘုရားတွင် ဝတ်ပြုဆုတောင်းပွဲကို လုံထိန်းနှင့် ရဲအင်အား ၄၀၀ ခန့်က လုံခြုံရေးချထား၍ စောင့်ကြည့်နေသည်ကို တွေ့ရစဉ် (ဓါတ်ပုံ မဇ္ဈိမ)
ယခု ချီတက်ဆုတောင်းပွဲမှာ အစိုးရသစ်တက်လာပြီး နောက်ပိုင်း ပထမဆုံး လူထုဝတ်ပြုဆုတောင်းပွဲလည်း ဖြစ်သည်။ထူးခြားစွာပင် ဆန္ဒပြမှုကို ကန့်ကွက်မှုများလည်း တပါတည်း ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။“မကြာမီမှာ
လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် (Amnesty) ရှိတယ်။ တိုင်းပြည် တည်ငြိမ်မှုနဲ့အတူ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ဖို့ ရှိတယ်။ မြစ်ဆုံ ပြဿနာ ဖြေရှင်းဖို့ ရှိတယ်။ မြစ်ဆုံပြဿနာကလည်း ပြေပြေလည်လည် ဖြစ်သွားမှာပါ။ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေး ရေချိန်က Arab Style Uprising ဖြစ်စရာ မရှိပါဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း ဒီလို ပြောထားတယ်။ ဒီလို ဆန္ဒပြမှုတွေကို ဘယ်သူမှ မလုပ်စေ ချင်ဘူး”ဟု ရန်ကုန်မြို့ အခြေစိုက် Weekly Media Group ၏ CEO ဒေါက်တာ သန်းထွဋ်အောင်ကို ကိုးကား၍ သူ၏ အပတ်စဉ်ထုတ် ဂျာနယ် ဝီးကလီး အလဲဗင်း၏ အွန်လိုင်း သတင်းတွင် ရေးသားထားသည်။ယင်းအပြင် “ဆန္ဒပြတာ မဟုတ်ဘူး ဆိုပေမယ့် အများပြည်သူ အကြားမှာ ဆန္ဒပြတယ်ဆိုပြီး အုပ်အော်သောင်းနင်း ဖြစ်သွားတယ်။
ဒီရိုက်ခတ်မှုမှာ Negative Impact ရှိတယ်။ ဆူးလေဘုရားမှာ ဆန္ဒပြသူက (၇ဝ)ကျော်၊ သတင်းယူ သူက (၁ဝဝ) ကျော် ရှိတယ်။ တချို့သတင်းထောက်တွေက သတင်း ကြိုရထားကြတယ်။ အလုပ်ဆိုတာ အရွေ့မရှိဘဲနဲ့ အလုပ်မပြီးမြောက်ဘူး ဆိုတာ နိုင်ငံရေးကို လုပ်ကိုင်နေတဲ့ သူတွေ၊ နိုင်ငံရေးတက်ကြွ လှုပ်ရှားသူတွေ အနေနဲ့ သိသင့်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးမှာ ရှုထောင့်တစ်ခုထဲက ကြည့်ရင် အရွေ့ဆိုတာ ဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ Bird eye view ဆိုတာ နယ်ပယ် အသီးသီး မှာရှိပါ တယ်။ တိုင်းပြည်ရဲ့ ရေရှည် အကျိုး၊ ဒုက္ခတွေခံစား နေရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးအတွက်
ကျနော်ကတော့ ဒီနေ့ဖြစ်ရပ်ကို လုံးဝသဘောမကျဘူး”ဟု Eleven Media Group ၏ CEO ဒေါက်တာ သန်းထွဋ်အောင်က ပြောကြားထားသည်။ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးသည် ၂ဝဝ၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့က ပခုက္ကူမြို့တွင် အစိုးရဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြ သံဃာတော်များကို အာဏာပိုင်များက ရိုက်နှက်မှု ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက် ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ စစ်တွေ စသည့် မြို့ကြီးများတွင် သံဃာ့လှုပ်ရှားမှုများ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။တိုက်ဆိုင်စွာပင် ယနေ့တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်၌ “ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခွင့်နှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ
စီတန်း လှည့်လှည်ခွင့် ဥပဒေမူကြမ်း” ကို ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်သည်။ယင်း ဥပဒေမူကြမ်းတွင် ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်း လှည့်လှည့်ခွင့်နှင့် စပ်လျင်း၍ အစိုးရဌာန အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းရုံး၊ အလုပ်ရုံ၊
စက်ရုံ၊ အလုပ်ဌာန ဘာသာရေးနှင့် သက်ဆိုင်သော နေရာများ၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဘူတာရုံ၊ လေဆိပ်၊ သင်္ဘောဆိပ်ကမ်း၊ ကားဂိတ်၊ ဆေးရုံတို့နှင့် အဆိုပါနေရာတို့ကို အနှောက်အယှက် ဖြစ်စေသည့် နေရာများတွင် “စီတန်းခွင့်နှင့်
စုဝေးခွင့်မရှိ” ဟု ပြဋ္ဌာန်းပါရှိသည်။ဥပဒေမူကြမ်းတွင် "ခွင့်ပြုချက် မရဘဲ၊ ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လှည်ခြင်း၊ ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းခြင်း၊ ပြစ်မှု ထင်ရှားပါက
တနှစ်ထက် မပိုသော ထောင်ဒဏ်နှင့် ငွေဒဏ်၊ စီတန်း လှည့်လည်သူများကို နှောက်ယှက်လျှင် နှစ်နှစ်ထက် မပိုသော ထောင်ဒဏ်" တို့ကို သတ်မှတ်ထားသည်။
9/26/2011 09:44:00 PM
“ဆူးလေမှာ ကျနော်တို့ စုရပ်ထားတယ်။ အဲဒါကို နေရာ ၃ ခုက လာကြတယ်။ လာတဲ့အခါ ပထမဆုံး မြောက်ဥက္ကလာမှာ လူစုခွဲခံလိုက်ရတယ်။ ကျနော်တို့ ငှားလာတဲ့ ကားတွေကို ပိတ်ဆို့ တားဆီးလိုက်တယ်။ တားဆီးပြီး ကားသမားတွေကို ခြိမ်းခြောက်ပြီး ကျနော်တို့ကို ဆက်မပို့အောင် လုပ်လိုက်တယ်။ လုပ်လိုက်တော့ ကျနော်တို့က လမ်းလျှောက်ပြီး လာတဲ့အခါမှာ ကမ္ဘာအေး စာတိုက်မှတ်တိုင်နားမှာ ကျနော်တို့ကို သွားခွင့် မပေးတော့ဘူး။ မပေးတော့တဲ့အတွက် ကျနော်တို့ အဲဒီနားမှာပဲ ဒေါ်နော်အုန်းလှ ဦးဆောင်ပြီး ၀တ်ပြုဆုတောင်းမှု လုပ်ခဲ့တယ်။”
ဒါဟာဆိုရင် မြန်မာအစိုးရသစ်အဖြစ် မတ်လကုန်မှာ တက်လာပြီးနောက်ပိုင်း ပထမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် တွေ့မြင်လာရတဲ့ လမ်းပေါ် ဆန္ဒပြပွဲတခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လုံခြုံရေး ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကတော့ ဒီလို ဆန္ဒပြပိုင်ခွင့် ပေးထားတဲ့ အခြေခံဥပဒေ အတည်မဖြစ်သေးဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ဟန့်တားခဲ့တာလို့ ကိုယ်တိုင် တားဆီးခံခဲ့ရသူ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ တဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါ်နော်အုန်းလှက ပြောပါတယ်။
“ကျမတို့က ကားပေါ်မှာ ၁၀၀၊ ၈၀ လောက်ရှိတယ်။ လမ်းမှာလည်း ကျမတို့ဘက်က လူ ၁၈၀ လောက်ရှိတယ်။ ကျမတို့က တားလို့ရှိရင် ဒီမှာပဲ ဘုရားကန်တော့မယ်။ ကျမတို့က ဆူပူလှုပ်ရှားတာ မဟုတ်တဲ့အတွက် ဆုတောင်းပွဲကို ဒီမှာပဲ လုပ်လိုက်မယ် ဆိုပြီးတော့ ဆုတောင်းပွဲ လုပ်လိုက်ပါတယ်။ ကျမတို့ လွတ်လပ်စွာ လမ်းလျှောက်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ် ဆိုတာကို အခြေခံဥပဒေမှာ ပါပြီးသား ဖြစ်တယ်လို့ ပြောတဲ့အခါကျတော့ ရဲမှူး ဦးအောင်တိုးက နေပြီးတော့ ပြလို့မရဘူးတဲ့၊ အခြေခံဥပဒေက အတည်မဟုတ်သေးပါဘူးတဲ့၊ ကျနော်တို့က အရင်ဥပဒေနဲ့ လုပ်တာပါလို့ ပြောပါတယ်။
“ကျမတို့နိုင်ငံမှာ အခြေခံဥပဒေကို လေးစား လိုက်နာတဲ့ အစိုးရ ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ ဥပဒေတခုကို ထုတ်ထားပြီးတော့ ဒါ အတည်မဟုတ်ပါဘူးလို့ လက်လွတ်စပယ် ပြောတာတော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ တကယ်တမ်းကျရင် ကျမတို့က အခြေခံဥပဒေကို လက်မခံခဲ့ပါဘူး။”
ဆူးလေဘုရားမှာလည်း အာဏာပိုင်တွေဘက်က လုံခြုံရေးဝန်ထမ်း အများအပြား ချထားပြီး တားဆီးခဲ့တယ်လို့လည်း နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်း တဦးက ဆက်ပြောပြပါတယ်။
“ဆူးလေဘုရားနဲ့ မြို့တော်ခန်းမရှေ့မှာတော့ လည်ပတ်အနီနဲ့ စစ်သားတွေ၊ လုံထိန်းတွေ၊ ကား ၆ စီးလောက်နဲ့ ရပ်တန့်ပြီး စောင့်ဆိုင်းနေတယ်။ အဲဒီနေရာ ကိုက် ၅၀ လောက် အကွာမှာပဲ လုံခြုံရေး ၀န်ထမ်းတွေ အပြည့်အ၀ ချထားတယ်။ ဘုရားရင်ပြင်ပေါ်မှာလည်း စရဖတွေ၊ သူတို့အင်အားစုတွေ ပြည့်နှက်နေအောင် ချထားပါတယ်။”
မြန်မာနိုင်ငံမှာ သံဃာ့လှုပ်ရှားမှုကြီး ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေကို အာဏာပိုင်တွေက ဖြိုခွဲဖမ်းဆီး သတ်ဖြတ်ခဲ့မှုတွေကို မမေ့လျော့တာကြောင့် နိုင်ငံရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေက ဒီကနေ့မှာပဲ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒတွေ ထုတ်ဖော်ခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
9/26/2011 09:32:00 PM
Written by အရှင်ပညာသီဟာဘိဝံသ (တရားဦးဓမ္မစကြာ) မိုးများပြီး မြို့ကြီးများ၊ မြို့နယ် ကလေးများ၌ အိမ်တွေ၊ လမ်းတွေ၊ စိုက်ပျိုးပြီး လယ်ယာမြေတွေ၊ ရေကြီးရေလျှံခြင်း၊ ရေမြုပ်၊ မြေပြို၊ လမ်းပျက်၊ တံတားကျိုးခြင်းတို့ကြောင့် လူများ ကသီလင်တ ဖြစ်လျက် ဒုက္ခရောက် နေကြရတာတွေ၊ နိုင်ငံတချို့မှလည်း တ၀ုန်းဝုန်းတဒိုင်းဒိုင်း ပစ်ခတ်ဖောက်ခွဲခြင်းတို့ကြောင့် လူများစွာ နေ့စဉ်သွေးသံရဲရဲဖြင့် သေနေကြရတာတွေ၊ အာဖရိက ဦးဂျိုဒေသ မှာ စားစရာရိက္ခာ ပြတ်လပ်ပြီး လူအများ အစာရေစာငတ်ပြတ်ကြ၊ ရောဂါဖြစ်ကြပြီး သေဖို့ စောင့်နေကြရတာတွေ၊ ငလျင်တွေ၊ မုန်တိုင်းတွေကြောင့် သေကြကျေကြ၊ ပိုင်ဆိုင်သည့် စီးပွားဥစ္စာများ ပျက်စီးဆုံးရှုံး ရဖြင့် လူသားတို့ ဒုက္ခရောက် နေကြရတာတွေကို ဂျာနယ်တို့တွင် အခုတလောများစွာ ဖတ်နေရသည်။ လူသားတို့သည် စိတ်ချလက်ချဖြင့် ပူပန်ခြင်းကင်းပြီး အေးအေးချမ်းချမ်း မရှိကြဘဲ ဖြစ်နေကြရသည်။
လူသားတွေက သစ်တောများ၊ မြစ်ချောင်း၊ အင်းအိုင်များ၊ ဇီဝမျိုး စိတ်ကွဲများစသဖြင့် အရာခပ်သိမ်းတို့ ကို ဖျက်ဆီးနေကြ၍ ဂေဟစနစ်တွေ ပျက်ပြီး ထိုကဲ့သို့ ဒုက္ခရောက်နေကြတာဟု ပညာရှင်များ ထောက်ပြကြတာကိုလည်း မှတ်သားရ၏။ သည့်အပြင် မိခင်ဧရာဝတီ၏ ကျန်းမာရေးကိုလည်း ဂျာနယ်၊ အင်တာနက် တို့၌ နေ့စဉ်လိုလို ဖတ်နေရ၏။
လူသားတို့မကြုံချင်သော ဒုဗ္ဘိက္ခန္တရကပ် (အစာရေစာငတ်ခြင်း)၊ သတ္တန္တရကပ် (လက်နက်ဒဏ်ခံရ ခြင်း၊ ရောဂန္တရကပ် (ရောဂါထူပြောခြင်း)၊ ဘေးတို့သည် လူသားတို့ထံ သို့ ဆိုက်ရောက်နေကြ၏။ သဘာဝ တရားတို့ကြောင့် ဖြစ်ရသောကပ်၊ လူတို့ကိုယ်တိုင် ဖြစ်ပေါ်စေသော ကပ်တို့ကြောင့် လူသားများနှင့် တိရစ္ဆာန်များပါ ဒုက္ခရောက်နေကြ၏။
မင်းကွန်းတိပိဋက ဆရာတော်ကြီးက ၇-၁-၁၉၄၇ လွတ်လပ်ရေး အကြိုကာလက ‘သွေးဖြင့်တည်ထောင် တို့ပြည်ထောင်ကို နောက်တစ်ဖန် ခေတ် ပြန်မနစ်ဖို့ အားသစ်မွေးမြူ အလေးမူလျက် ရှင်လူနှစ်ခန်း ကိုယ့်ဝန်လမ်းကို ထမ်းမှတော်မည်’ ဟူ၍ ရေးသား ဆုံးမတော်မူခဲ့ ပါသည် . . . ထိုဒုက္ခသုခတို့မှ အပြီးတိုင် လွတ်မြောက်အောင် မစွမ်းဆောင်နိုင်သော်လည်း စွမ်းနိုင်သူများက ကာယကံမြောက် ကူညီဆောင်ရွက် ပေးနေကြသည်တို့ကိုလည်း သာဓုခေါ်ဖွယ် ဖတ်ရပါသည်။ တောင်မင်း မျောက်မင်း မကယ်နိုင်ဟုဆိုပြီး မျက်ကွယ်မပြုတတ်ကြခြင်းကား လူသူတော် ကောင်းတို့၏ စိတ်ဓာတ်နှင့်စရိုက် လက္ခဏာဖြစ်၏။
လောကသားတို့အား ‘သဗ္ဗေ သတ္တာ ကမ္မဿကာ’ ဟု ပေယျာလ ကန်ပြီး မျက်ကွယ်ပြုမထားကြရပါ။ ဒုက္ခသုခတွေမှလွတ်အောင်၊ ကသိ ကအောက်မဖြစ်ကြရအောင်၊ အများ ကောင်းစေဖို့ပြောင်းလဲပေးကြခြင်း ဖြင့် သတ္တ၀ါတို့ကိုဒုက္ခနယ်မှလွတ် မြောက်စေကြရပါမည်။ ချမ်းသာစေ ကြရပါမည်။ ဆင်းရဲမွဲတေမှုသည် ဒုက္ခအားလုံးကို ဖိတ်ခေါ်နေသလိုမျိုး ဖြစ်၍ဆင်းရဲခြင်းကင်းအောင် ပြောင်းလဲပေးနိုင်ကြရပါမည်။ ဆင်းရဲတ ကာတို့တွင် အသိမွဲခြင်းကား အဆိုးဆုံးဖြစ်၏။ ဒုက္ခအားလုံးသည် အသိ ဆင်းရဲခြင်းကို အခြေခံပါသည်။
ထို့ကြောင့် စွန်းနိုင်သူများ၊ တာဝန်ရှိသူများက သတ္တ၀ါအများ ချမ်းသာပွားအောင် ဖော်ဆောင်ပေးကြရ ပါမည်။ အားလုံးကောင်းဖို့ ပြောင်းလဲပေးကြရပါမည်။
ပုထုဇဉ်သဘာဝအဟောင်းမှာ အသားကျပြီး အဆင်ပြေအရသာ တွေ့နေသူများကား ပြောင်းလဲလိုဟန် ရှိကြမည်မဟုတ်။ တစ်ယောက်၊ တစ်မိသားစု၊ တစ်ဖွဲ့ချမ်းသာရုံမျှဖြင့် လူမှုနယ်ပယ်မှာ အေးချမ်းဖွယ်ရာရှိမည် မဟုတ်ပါ။
‘အရောဂါသုခိတာ ဟောထ၊ သဟသဗ္ဗေဟိဥာတိဘိ’ ဟူသော ဗုဒ္ဓ ဒေသနာနှင့်အညီ မျိုးနွယ်တူ အားလုံး တို့ကိုပါ ရောဂါကင်းစေကြရပါမည်။ ချမ်းသာစေကြရပါမည်။ သို့မှသာ လူသားလောက နေချင်စဖွယ်ရှိမှာဖြစ်၏။
လူသားတိုင်းသည် အပြောင်းအလဲကို ခုံမင်ကြ၏။ သင်္ခါရနယ်မို့ မပြောင်းလဲဘဲနေ၍မရ။ အိုဘားမား ၏ change we need စကားကို ကြားရပြီးနောက် change ဆိုသော စကားသံလူတွေကြားပို၍ အသံကျယ် လာ၏။ နိုင်ငံအချို့တွင် အနုနည်း၊ အကြမ်းနည်းတို့ဖြင့်ပြောင်းလဲဖို့ကို ကြိုးစားနေကြသည်များကို သတင်း တို့၌နေ့စဉ်ကြားနေ၊ ဖတ်နေရ၏။
မပြောင်းလဲလျှင် တချို့အရာတို့သည် မကောင်းဘဲရှိတတ်၏။ ကျေးလက်တို့၌ မြို့ပြကဲ့သို့ရေသန့်ဘူးများ အသုံးမတွင်ကျယ်သေး၍ ယနေ့တိုင် ရေတွင်းရေကန်တို့မှ သောက်ရေကို ရေအိုးဖြင့် သယ်ဆောင်ပြီး စစ်သောက် နေကြရသေး၏။ သောက်ရေအိုးထဲ က ရေကိုနှစ်ရက်ခြား သုံးရက်ခြား ရေဟောင်းရေသစ် ပြောင်းလဲပေးကြရသည်။ ရေစစ်ဖြင့်စစ်ထည့်ထားသော်လည်း ရက်ကြာလာလျှင် အနည်ရှိလာ၏။ မည်သည့်အရာမဆို ကြာလာလျှင်တော့ အပြစ်အနာအဆာရှိ လာတတ်သည်မှာ ဓမ္မတာမို့ပြောင်း ကိုပြောင်းလဲပေးကြရပါမည်။
နေ့စဉ် အိမ်မှာစားနေကျထမင်း ဟင်းကိုပင် တစ်ခါတစ်ရံ အပြောင်းအလဲလေး ဖြစ်သွားအောင်ဟု ဆိုကာ မိသားစုတွေဆိုင်သွားပြီး ဆိုင်ထမင်း၊ ဆိုင်ဟင်းကို စားလေ့ရှိကြ၏။ မပြောင်းမလဲ တစ်သတ်မတ်တည်း ဖြစ်နေရတာကို ငြီးငွေ့ခြင်းသည် လူ့သဘော၊ လူ့မနောဖြစ်၏။ အပြောင်းအလဲ ကို လူသားတိုင်း ခုံမင်တတ်ကြသည် မှာ ဓမ္မတာ။ လူသားတို့ဆန္ဒကို စွမ်းနိုင်သူများက ပြောင်းပေးခြင်းဖြင့် ဖြည့်ဆည်းပေးကြရမှာ ဖြစ်၏။
အပြောင်းအလဲနှင့် ပတ်သက်၍ စာနယ်ဇင်းတို့တွင် ဂိမ်းသီအိုရီ၊ အမာထည် အပျော့ထည်၊ ၀င်းဝင်းသီအိုရီ၊ ပလေယာအသစ် စသဖြင့် ယခင်က မကြားရဖူးသော အသုံးအနှုန်းကို ဖတ်ရှုရ၏။ တချို့ အပြောင်းအလဲနှင့် ပတ်သက်၍ ကိုယ်သန်ရာကို ပြောကြဆိုကြ ရေးသားကြတာတွေကိုလည်း ယခုအခါများစွာ ဖတ်ရှုနေရသည်။
ဟောင်းလို့ဖြစ်စေ မကြိုက်တော့ လို့ဖြစ်စေ ပျက်လို့ဖြစ်စေ ပြောင်းလဲမည်ဆိုလျှင် နိုင်ငံနှင့် လူမျိုးအားလုံး ကောင်းဖို့ဆိုသော သမ္မာဆန္ဒဖြင့်သာ ပြောင်းလဲကြရပါမည်။ ‘ဟောင်းလို့ ပြောင်းလဲတာမျိုး၊ အများမကြိုက် တော့လို့ပြောင်းလဲတာမျိုး၊ မြွေအရေခွံလဲသလိုမျိုးနှယ် အနှစ်မပါအကာမျှ ပြောင်းလိုက်ခြင်းကား ဒိတ်ကုန်သွားသော အစားအသောက်ကို ဒိတ်အသစ် စက္ကူပြောင်းလဲ ကပ်လိုက်ခြင်းမျိုးမို့ ဘာမှထူးခြားမှု ရှိမလာ၍ ကောင်းတယ်’’ဟု မဆိုနိုင်ပါ။
ကောင်းဖို့ဆိုရာမှာလည်း နိုင်ငံ နှင့်လူမျိုး အားလုံးကောင်းဖို့ ဖြစ်သင့်၏။ လူအများက နှစ်မြို့ခြင်းမရှိတော့၍ နှစ်သက်စေဖို့လတ်တလော အများနှစ်သက်စေရန်သကာ ဖုံးသော အပြောင်းမျိုးမ ဟုတ်ကြပါ။ သည့်အပြင် တစ်စုတစ်ဖွဲ့ ကောင်းစားဖို့ဆိုတာမျိုးလည်း မဖြစ်စေကြရပါ။
ယနေ့တိုင်အောင် မပြီးပြတ်သေးသော ငြင်းခုံမှုတစ်ခုရှိ၏။ ‘လူကောင်းနှင့် လူတော်’ ဘယ်သူကပို အရေးကြီးပါလဲ၊ ဆိုသော ပြဿနာ ဖြစ်၏။ တရားပွဲမှာ ‘လူကောင်းနဲ့လူတော် ဘယ်သူက အရေးကြီးပါလဲ’ဟု မေးပါက တရားနာပရိသတ်က ‘လူတော် ကပိုအရေးကြီးပါတယ်’ ဟူ၍လည်း ကောင်း၊တချို့ကလည်း ‘လူကောင်း ကပိုအဓိကကြပါတယ်’
ဟူ၍လည်း ကောင်းအားသန်ရာ ဖြေဆိုကြ၏။
ထိုအခါ ‘တော်တာရောကောင်းတာပါ’ နှစ်မျိုးစုံသူက ပိုအရေးကြီးကြောင်း၊ အဓိကလည်းကျကြောင်း ကိုပြောပြပြီး အဘယ်ကြောင့် ‘တော်သူရော ကောင်းတာပါ’ နှစ်မျိုးစုံသူ က ပိုပြီးအရေးကြီးပါတုန်း ဆိုလျှင် ‘ပညာပြည့်ဝနှလုံးလှသူ၊ အဆင်းရော အချင်းပါပြည့်စုံသူ’ ဖြစ်သော ကြောင့်ဟု ရှင်းပြရ၏။
လူသားကမ္ဘာ၏ကောင်းကျိုး သုခချမ်းသာ မှန်သမျှပညာပြည့်ဝ နှလုံးလှကြသူများ၊ အဆင်းရော အချင်းပါ ပြည့်စုံသူများကသာ ဖော်ဆောင်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။ ထိုသူများကြောင့် လောကသားတို့ ဒုက္ခမများပြီး ဒုက္ခမပွားခဲ့ကြရပါ။
ထို့ကြောင့် တော်တာရော၊ ကောင်းတာပါ ပြည့်စုံဖို့လိုအပ်၏။ တော်တာရော ကောင်းတာပါ နှစ်မျိုး ပြည့်စုံသူကို ဘုရားမြတ်စွာက ‘သူတော်ကောင်း (သပ္ပုရိသ)
‘‘အားလုံးကောင်းဖို့ပြောင်းလဲကြ စို့”ဆိုလျှင် ပြောင်းပေးမည့်သူများသည် တော်သူ၊ ကောင်းသူ၊ သူတော်ကောင်းများ ဖြစ်ဖို့ အလွန်လိုအပ်လှပါသည်။
သူတော်ကောင်းတို့သည် ကိုယ့်အတွက်၊ မိသားစုအတွက်၊ ဆွေမျိုးတို့အတွက်၊ လူမျိုးအတွက်၊ တိုင်းနိုင်ငံ အတွက် တစ်လောကအားလုံးအတွက် ပစ္စုပ္ပန်အတွက်၊ သံသရာအတွက် ကောင်းအောင် ပြောင်းလဲပေးနိုင်သူများ၊ လုပ်ပေးနိုင်သူများဖြစ်ကြ၏။
သူတော်ကောင်းသည် မိမိနှင့် အားလုံးကောင်းဖို့ တစ်ရက်ထက်တစ်ရက်၊ တစ်လထက်တစ်လ၊ တစ်နှစ် ထက်တစ်နှစ်၊ တစ်ဘ၀ထက်တစ် ဘ၀၊ တစ်ဆင့်ထက် တစ်ဆင့်မြင့်အောင် ကောင်းဖို့ ပြောင်းလဲပေးနိုင်သူဖြစ် ၏။ သူတော်ကောင်းဟုဆိုသူများသည် ဖော်ပြပါ လက္ခဏာများနှင့် ပြည့်စုံကြ၏။
သူတော်ကောင်း (သပ္ပုရိသ) လက္ခဏာများ -
သူတော်ကောင်းသည် သန္ဓေဥာဏ်၊ ဗီဇကိုက ကောင်းခဲ့ကြသူများ ဖြစ်ကြ၏။ ကောင်းသောစိတ်ဖြင့် သန္ဓေနေခဲ့ကြ၏။ ပင်ကိုဓာတ်ခံက ပင် အတ္တ-ပရမျှ၍ တွေးဆတတ် ၏။ လောကအကျိုး၊ လူမျိုးအကျိုး သယ်ပိုးလိုစိတ်ရှိ၏။ ဥာဏ်ထက်သူ၊ ဥာဏ်သွက်သူ၊ အရှည်ကိုမြင်နိုင်စွမ်း သောဆင်ခြင်တုံ မြော်မြင်တုံ ဥာဏ်အမြင်ရှိသူ ဖြစ်၏။
တချို့သည် သန္ဓေကပင်လျင် ဥာဉ်ဆိုးတတ်၏။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည် အများကောင်းအောင် ပြောင်းလဲလိုကြ သူများ မဟုတ်တတ်ကြ။ အသိနည်းသည်နှင့်အမျှ အတ္တကြီးတတ်ကြ၏။ တစ်ကိုယ်ရေ ကောင်းစားရေး၊ မိသားတစ်စု၊ ဆွေမျိုးတစ်စု ကောင်းစားရေး၊ တစ်စုတစ်ဖွဲ့မျှ ကောင်းစားရေးကိုသာ အလေးထားတတ်ကြ၏။
ရွှန်းရွှန်းဝေအောင် ပြောတတ်ကြ၏။ အသံကောင်း ဟစ်တတ်ကြ၏။ အဓိပတိလေးပါးအညီ ကာယကံမြောက် မလုပ်ဆောင်တတ်ကြ။ အပြောသာ ချဲ့၍ အလုပ်မဲ့သူများဖြစ်ကြ၏။
အသွင်ကူးပြောင်းရေးသည် အားလုံးကောင်းဖို့ဖြစ်၏။ သန္ဓေဥာဏ် ကောင်းသူများသည် ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်အရ အဓိပတိလေးပါးနှင့် ပြည့်စုံသူများ ဖြစ်ကြ၏။ အများကောင်းဖို့ ပြောင်းလဲပေးချင်သော ဆန္ဒ၊ မိမိအပါအ၀င် အားလုံးကောင်းစေချင်သော စိတ်ထား၊ အားလုံးကောင်း အောင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် စကားမျှ မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ရောစိတ်ပါနှစ်၍ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ၀ီရိယ၊ ထိုဆန္ဒ၊ စိတ်၊ ၀ီရိယတို့ကို ထိန်းကျောင်းပဲ့ကိုင် ပေးနိုင်သော ပင်ကိုအသိ၊ လေ့လာ မှတ်သားခြင်း၊ ခေတ်အခြေအနေကို တတ်သိနားလည်ခြင်း၊ ရင့်ကျက်အသိအားဖြင့် အဓိပတိလေးပါးနှင့် ပြည့်စုံကြ၏။ အာဇာနည်များ၊ သမိုင်းဝင် ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ စွန့်ဦးတီထွင်သူများသည် ထိုအဓိပတိလေးပါးနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်သွားကြသူများ ဖြစ်ကြ၏။
သူတော်ကောင်းတို့သည်သန္ဓေဥာဏ်ကောင်းရုံမျှမဟုတ်။ ကိုယ်နှုတ် နှလုံးသုံးပါးလုံးလည်း ဖြောင့်မှန်၏။ စဉ်းလဲကောက်ကျစ်ခြင်း အလျဉ်းမရှိ။ ပညာ
ပြည့်ဝ နှလုံးလှသူ၊ ဖြူစင်သူဖြစ်၏။
ဘုရားရှင်က တရားအားထုတ်ကြသူများ ပြည့်စုံကြရမည့် အင်္ဂါငါးပါး၊ မေတ္တာပို့သူ၊ မေတ္တာပွားသူ၊ မေတ္တာသုတ်ရွတ်ဖတ် ပူဇော်မည့်သူများ ပြည့်စုံကြရမည့် အင်္ဂါ ၁၅ ပါး တို့တွင် ကိုယ်နှုတ်နှလုံးသုံးပါးလုံး ရိုးသားဖြောင့်မှန်ခြင်း အင်္ဂါကို ထည့်သွင်း ဟောကြားတော်မူသဖြင့် မရိုးသားသူ၊ ကောက်ကျစ်သူ၊ စဉ်းလဲသူ များသည် တရားအားထုတ်က တရားထူးမရနိုင်၊ မေတ္တာပို့ကလည်းမေတ္တာ အကျိုးနှင့် မေတ္တာဈာန်မရနိုင်ပါ။
မည်သည့်ကိစ္စမျိုးမှာမဆို လိုလားသည့် ကောင်းကျိုးများ ပြည့်ပြည့်၀၀ ဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်ဖို့ဆိုလျှင် ပါဝင်ပတ်သက်သူတို့သည် ရိုးသား ဖြောင့်မှန်ကြရပါမည်။ အလားတူ အသွင်ကူးပြောင်းချင်သူ၊ အားလုံး ကောင်းဖို့ပြောင်းလဲချင်သူ၊ မည်သူမဆို ပါဝင်ပတ်သက်သူမှန်သမျှ ရိုးသားဖြောင့်မှန်ကန်သူများ ဖြစ်ကြရ ပါမည်။ ‘‘အားလုံးကောင်းဖို့ ပြောင်းလဲကြပါစို့’’ဟု ပြောနေသူကိုယ်တိုင် က’’တကယ်ရော ရိုးသားဖြောင့်မှန် သူဖြစ်ပါရဲ့လား’’ ဆိုတာကို ဦးစွာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆန်းစစ်ရပါမည်။
သူတော်ကောင်းသည် ကျေးဇူးသစ္စာကို သိ၏။ ကျေးဇူးလည်းဆပ် တတ်၏။ ဖြောင့်မတ်ခြင်းမရှိသူသည် ဂုဏ်ကျေးဇူးကို မသိတတ်ရုံမျှ မက ကျေးဇူးရှိခဲ့ဖူးသူ၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုပင် ချေဖျက်တတ်၏။ တင်ရှိခဲ့ ဖူးသော ကျေးဇူးကို ဖုံးကွယ်ထား တတ်၏။ ကျေးဇူးမဲ့သူကို မိတ္တဒုဗ္ဘီ ပုဂ္ဂိုလ်ဟုဆို၏။ အရိပ်ခိုဖူးသည့် သစ်ကိုင်းသစ်ခက်ကိုပင် မချိုင်မခုတ်ကြရပါ။ သူတော်ကောင်းသည်
ကျေးဇူးရှိခဲ့သည် သက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်ကိုပင် မဆိုထားနှင့်သက်မဲ့သစ်ပင်စသည်တို့ ၏
ကောင်းဖို့ပြောင်းလဲလိုသူများသည် ကျေးဇူးရှိခဲ့ဖူးသူတို့အပေါ် ကျေးဇူးသစ္စာကို စောင့်သိရိုသေကြသူများ ဖြစ်ကြရပါမည်။ ကျေးဇူးရှင်ပါ ကျေးဇူးရှင်ပါဟု နှုတ်ကပြောနေရုံမျှ ဖြင့်မပြီး။ ကျေးဇူးရှိခဲ့ဖူးသူတို့ကို ကျေးဇူးဆပ်ကြရပါမည်။
တင်ရှိခဲ့ဖူးသော ကျေးဇူးကို အသိအမှတ်မပြုသူ၊ ကျေးဇူးကန်းသလိုမျိုး လုပ်ဆောင်သူများသည် ဘယ်သောအခါမှ ကောင်းဖို့ပြောင်းလဲနိုင်သူ များမဖြစ်နိုင်ပါ။
၆။ မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားပြီးကောင်းသော အကြံဥာဏ် ကို လေးစားလိုက်နာသူဖြစ်ခြင်း။
သူတော်ကောင်းသည် မိတ်ဆွေကောင်း၊ မိတ်ဆွေယုတ်ကို ခွဲခြားသိ၏။ ကောင်းဖို့ ပြောင်းလဲလိုသူများသည် မိတ်ဆွေကောင်းများရှိကြရ၏။ ထို မိတ်ဆွေကောင်း၏အကြံကောင်းများ၊ အတွေ့အကြုံများ၊ နည်းပညာများ၊ လမ်းညွှန်ချက်များကို လေးစားလိုက် နာကြရ၏။ မိတ်ဆွေကောင်းလည်း မရှိ၊ ရှိဦးတော့ အကြံကောင်း၊ အတွေ့ အကြုံကောင်းများကို လျစ်လျူရှုထားလျှင် ကောင်းဖို့ပြောင်းလဲနိုင်မည် မဟုတ်။ တချို့ကြတော့ အသိခေါက်ခက် အ၀င်နက်ကြ၏။ ကိုယ်ကလည်း နားမလည်၊ နားလည်သူများက ပြောတာကိုလည်း လက်မခံချင်တတ်၊ အများ နှင့်သင့်၊ မသင့်၊ မချင့်ချိန်ဘဲ ငါတကော ကော၍ ပြုမူလေ့ရှိတတ်၏။
Written by ဇေ၀င်းနောင် မဟာတံတိုင်းကြီး နောက်ကွယ်က သမိုင်းအမှန်တွေကို ရောင်ပြန်ဟပ်စေသော ဒဏ္ဍာရီတစ်ပုဒ် ရှိခဲ့ပါသည်။
မန်ကျန်းနု ကလေးအရွယ် ရောက်လာသောအခါတွင်တော့ ဖန်ရှီးလင် ဆိုသော လုလင်ပျိုနှင့် ချစ်ကြိုက်မိကြကာ လက်ထပ်ထိန်းမြားရန် စီစဉ်ခဲ့သည်။ ဒီအချိန်မှာကံကြမ္မာဆိုး က ၀င်လာခဲ့သည်။ မင်္ဂလာဆောင်သည့်နေ့တွင်ပင် ရှီးလင်ကို မဟာတံတိုင်း တည်ဆောက်ရေးအတွက် ချွေးတပ်ဆွဲ (ပေါ်တာဆွဲ) သွားကြသည်။ မဟာတံတိုင်းအတွက် ချွေးတပ်ဆွဲခံခဲ့ရသူ တစ်ဦး၏ဘ၀သည် ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုတို့ဖြင့် သေခြင်းသာ အဆုံးရှိသည်က များကြသည်။ တစ်နှစ်သာကြာသွားသည်။ ရှီးလင် သတင်းကမရ။ နုက စိတ်ပူလှပြီ။ မဟာတံတိုင်းကို ရောက်အောင် သွားပြီး သူ့ခင်ပွန်းအကြောင်း သွားစုံစမ်းဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ခက်ခဲသော တစ်ကိုယ်တော်ခရီးကို ဖြတ်သန်းပြီး မဟာတံတိုင်းဆီရောက်တော့ သတင်းဆိုးက ဆီးကြိုနေသည်။ ရှီးလင် တစ်ယောက် အလုပ်လုပ်ရင်း သေလွန်ခဲ့ပြီ။ အလောင်းကရော။ တံတိုင်းအောက်မှာ သေသူ အလုပ်သမားတွေကို မြှုပ်ထားသည်ဆိုခြင်းကို နုသိလိုက်ရသည်။ သည်းထန်စွာ ငိုကြွေး ရင်း တံတိုင်းကိုဖြိုတော့သည်။သစ္စာ မေတ္တာစွမ်းက ကြီးလှသည်။ သူငို ကြွေးရင်းထုနှက်သော နေရာတစ်ဝိုက်မှ တံတိုင်းကြီးပျက်စီးပြိုလဲ သွားခဲ့သည်။ မရေမတွက်နိုင်သော အရိုးတွေ တောင်ပုံရာပုံ။ သူ့ချစ်လင်၏ အရိုးကို ရှာဖို့အတွက် သစ္စာဆို သည်။ သူ့လက်ထိပ်ကို ကိုက်၊ကျ လာသောသွေးနှင့် အရိုးတိုင်းကို စမ်း ကာ ချစ်လင်အရိုးဖြစ်လျှင် ကျသော သွေးကိုအရိုးက စုပ်ယူပါစေဟု သစ္စာဆိုခဲ့သည်။ ချစ်လင်အရိုးကို နောက်ဆုံးမှာ ရှာတွေ့ခဲ့သောအခါတွင်လည်း အရိုးပုံကိုဖက်ပြီး ငိုရှာရပြန်သည်။
Three Gorges Dam ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ဘူမိနှင့် ရေအားလျှပ်စစ် အင်ဂျင်နီယာပညာ အသီးသီးဖြင့် ကျောင်းပြီးခဲ့ကြသော ၀န်ကြီးချုပ် ၀မ်ကျားပေါင် နှင့် သမ္မတ ဟူကျင်တောင်တို့ မတက်ရောက်ခဲ့။ သမိုင်းတရားခံတော့ အဖြစ်မခံလိုကြ။ အမျက်ထွက်နေသော ကျင်မင်းဆက် ပြည့်ရှင်ဧကရာဇ်ကြီးက ပျက်စီးသွားသောနေရာကို
လာကြည့်သည်။ မအိုသေးသော မုဆိုးမ မန်ကျန်းနုကိုမြင်တော့ ဘုရင်ကြီး သဘောခွေ့သွားသည်။ ဒေါသတွေအရည် ပျော်သွားသည်။ တောင်းဆိုချက် သုံးချက်ကို ခွင့်ပြုလျှင် လက်ထပ်မည် ဟု နုကတုံ့ပြန်သည်။ ပထမအချက် က သူ့ချစ်လင်ကို တော်ဝင် အခမ်းအနားဖြင့် သင်္ဂြိုဟ်ရမည်။ ဒုတိယ အချက်က ဧကရာဇ်ကြီးနှင့် သူ့အစိုးရသည် ဈာပနကိုတက်ရမည်။ တတိယအချက်က သူသမုဒ္ဒရာကို ကြည့်ချင်သည်၊ လိုက်ပို့ပေးရမည်ဟု။ အရပ်သား တစ်ယောက်အတွက် လုပ်မပေးချင်လှသော်လည်း သူ့မယား
လိုချင် သူ့လင်ကောင်းကောင်း သင်္ဂြိုဟ်ပေးရမည်ပေါ့။ တတိယ တောင်းဆိုချက် ရောက်လာသည်။ သမုဒ္ဒရာ ကမ်းခြေသို့ အရောက်တွင်တော့ နု တစ်ယောက် ဘုရင်ကြီးကို
ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကျိန်ဆဲပြီးသမုဒ္ဒရာထဲ ခုန်ချ လိုက်လေသည်။ ဤတွင်ဇာတ်လမ်း ဆုံးလေသည်။
(ဇာတ်နာမှာ စိုးရိမ်သူ သူတို့ကတော့ မန်ကျန်းနုကို နဂါးမင်းကြီး နှင့် သမီးတော်များက ကယ်တင်လိုက် ကြသည်ဟု ဆိုကြသည်။) ဒီဇာတ်လမ်းသည် စီမံကိန်းကြီးကြောင့် ခင်ပွန်းကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရသော မုဆိုးမများ၊ သားကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရသော မိဘများ အားလုံးကို ကိုယ်စားပြုနေသည်။ တရုတ်ပြည်၏ မြောက်ဖက်ဖျားကို အိမ်ခြံစည်းရိုးခတ်သလို တံတိုင်းကာဖို့သည် တရုတ်၏ ပထမဆုံး
ဧကရာဇ် ရှီဟွမ်တီ၏ အကြံအစည်။ မြောက် ဖျားမှ သူတို့ခေါ်ဝေါ်မှုအရ လူရိုင်းတွေ၏
ရန်မှကာကွယ်ရေး။ ရည်ရွယ်ချက်ကဖြင့် ကောင်းချင်ကောင်းနိုင် ပါသည်။ သို့ပေမဲ့ ပေးဆပ်လိုက်ရသည်က များလွန်းလှသည်။ မုဆိုး အလိုကျ စတေးလိုက်ရသည့် သားကောင်တွေ တစ်ပုံတစ်ပင်။ သည်တံတိုင်းကြီးက အမှန်တကယ် ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်းရှိ မရှိဆိုသည်က လည်းမွန်ဂို၊ မန်ချူး၊ ဗြိတိသျှ၊ ဂျပန်
တို့၏ ကျူးကျော် သိမ်းပိုက်မှု အလီလီ ခံခဲ့ရခြင်းက သက်သေ။
၁၉၃၂ မှာ ချန်ကေရှိတ်၊ ၁၉၃၉ မှာ ထိုစဉ်က တရုတ်ကို သိမ်းထားသော ဖက်ဆစ်ဂျပန်များ၊ ၁၉၄၉ မှာ မော်စီတုန်းအားလုံးက တည်ဆောက်ဖို့ မျှော်လင့်ခဲ့ကြသည်။ ၁၉၉၂ ခုနှစ် တွင်မှ တည်ဆောက်ရေးကို တရုတ်ပြည်သူ့ ကွန်ဂရက်တွင် စတင်အတည်ပြုနိုင်ခဲ့သည်။ ကိုယ်စားလှယ် ၂၆၃၃ ယောက်မှာ ၁၇၆၇ ဦး
ထောက်ခံပြီး ၁၇၇ ကန့်ကွက်ကာ ၆၆၄ မဲပယ် ဖျက်ခံရပြီး ၂၅ ဦးမဲ မပေးခဲ့ကြခြင်းဖြင့် ဒီဆည်ကြီး တည်ဆောက်ရေး အတည်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကန့်ကွက်သူပမာဏသည် နည်းလှသည်ဟု ထင်ရသော်လည်း တစ်ပါတီစနစ်ရှိသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွက် ကန့်ကွက်မှုနှုန်း စံချိန်တင်သည့်ကိစ္စ ဖြစ်သည်။
သဘာဝကို ကိန်းဂဏန်းဖြင့် လျှော့တွက်မိခြင်း ဖြစ်ခဲ့သည်ကိုတော့ အချိန်လွန်မှ နားလည်ခဲ့ကြသည်။ ဂျပန်လိုနိုင်ငံမျိုးမှာပင် ငလျင်လှုပ်မည်ကို အချိန်စောပြီးမပြောနိုင်သေး။ သဘာဝဘေးတို့ကို လူသား၏ တွက်ချက်နိုင်စွမ်းက အပြည့်အ၀ လိုက်မမီသေး။ သို့ပေမဲ့ သဘာဝသည် ဖြစ်ချင်တိုင်း ဖြစ်နေသည်တော့ မဟုတ်။ သိပ္ပံပညာရှင်ကြီး အိုင်းစတိုင်းတစ်ခါက ပြောခဲ့ဖူးသည်။ “ထာဝရဘုရားသည်
သဘာဝတရားနဲ့ ကြွေအံမကစား”ဟူ၍။ သဘာဝတရားသည် ဖြစ်ချင်တိုင်း ဖြစ်နေသည်မဟုတ်။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ သက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်က အရှင်အဿဇိမထေရ် က ရှင်သာရိပုတ္တရာ အလောင်းအလျာ ဥပတ္တိသပရဗိုဇ်ကို ဟောပြခဲ့သည့် ဗုဒ္ဓတရားအနှစ်ချုပ်ကို အမှတ်ရမိသည်။ ယင်းဂါထာ၏အစ “ယေဓမ္မာ ဟေတုပ္ပဘ၀ါ” ဆိုသော စာသား။ အကြင်တရားတို့သည် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ဖြစ်ကုန်၏ဟူ၍ အနက်ရပါသည်။ လူတို့ တွက်ချက်နိုင်သော အကြောင်းတရားမည်မျှ ရှိနိုင်မည်နည်း။ ဘက်ပေါင်းစုံမှ တွက်
ချက်ထားပြီးဖြစ်သည်ဟု မည်သူကများ ပြောနိုင်မည်နည်း။
ပြဿနာပေါင်းများစွာ ကပ်ပါလာခဲ့သည်။ ဆည်ကြီးပြီးစီးလုချိန် ၂၀၀၇ မှာတည်းက
၀န်ကြီးချုပ် ၀မ်ကျားပေါင် ကိုယ်တိုင်က အန္တရာယ် ကို ၀န်ခံလာရသည်။
ဆည်ကြီးကပေးသော သင် ခန်းစာသည် တရုတ်တစ်နိုင်ငံတည်းအတွက် မဟုတ်။တစ်ကမ္ဘာလုံးအတွက် ဖြစ်သည်။ ဧရာမဆည်(Mega Dam) တွေ တည်ဆောက်ရေးကို ပြန်သုံးသပ်လာကြသည်။ ဘုရားဇီးက အမေဇုန်မြစ်မှာ ဆည်ကြီးဆောက်မည့် အစီအစဉ်ကို
ဖျက်သိမ်းလိုက်သည်။ တရုတ်ကိုယ်တိုင်လည်း နောက်ထပ်ဆည်တွေ ဆောက်ရေးကို ပြန်သုံးသပ်နေရသည်။ အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည့် စီမံကိန်း တို့ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်သည်။ သို့ပေမဲ့ အချို့ကိုတော့ မလွှဲမရှောင်သာ ဆက်ဆောက်ရမည်။ ဂျပန်ငလျင်နှင့် နျူအကျပ်အတည်းကြောင့် တရုတ်၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအတွက် နျူစက်ရုံကိုမှီခိုရေး ကြံရွယ်မှုမှာလည်း နောက်ဆုတ်ရမည့် သဘောဖြစ်သွားခဲ့သည်။ ဓာတ်အား လိုအပ်ချက် ကလည်းရှိနေသည်။ ပြည်ကြီး ရှင်တွေ၊ ပြည်ကြီးရဲ့ သဘာဝရင်းမြစ်တွေ၊ ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ်တွေကိုတော့ ဆည်ကြီးများ၏
သားကောင်အဖြစ် မခံလိုတော့။ . . .
Written by လူထုစိန်ဝင်း လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကစပြီး လူတိုင်းရဲ့ပါးစပ်ဖျားမှာ ဒီမိုကရေစီ ဆိုတဲ့စကား ရေပန်းစားလာခဲ့တယ်။ စကားဝိုင်းတွေမှာလည်း ဒီမိုကရေစီ၊ စာအုပ်တွေ၊ စာစောင်တွေထဲမှာလည်း ဒီမိုကရေစီ ဖြစ်နေကြတော့တယ်။
အစိုးရကိုယ်တိုင်က ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းအတိုင်း ချီတက်မယ်ပြောချိန်ကစပြီး ရှေးကဒီမိုကရေစီကို နှာခေါင်းရှုံ့ခဲ့ကြသူတွေလည်း လေသံပြောင်းပြီး တစ်ဒီတည်းဒီလာခဲ့ကြတယ်။ ဒီမိုကရေစီ ဖတ်စာအုပ်တွေ တစ်အုပ်ပြီး တစ်အုပ် ရေးထုတ်လာကြတယ်။ ဒါလည်း ကောင်းတဲ့ကိစ္စ ဖြစ်တယ်။ ဒီနှစ်
၅၀ အတွင်းမွေးဖွား လာခဲ့ကြသူတွေဟာ လွတ်လွတ်လပ် လပ်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကား စားသောက်ချင်တယ်၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြောချင်ဆိုချင် ရေးချင်ဖတ်ချင် တယ်ဆိုတာလောက်ကလွဲပြီး ဒီမိုကရေစီအကြောင်း ဂဃနဏ မသိကြဘူး။
အားမတန်လို့ မာန်လျော့ခဲ့ကြပေမယ့် လည်စင်းခံနေကြတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ အခါအခွင့်သင့်တိုင်းပုံစံ အမျိုးမျိုးနဲ့ နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲတွေ ဆက်လက် ဆင်နွှဲနေကြတယ်။ ၀ိုင် အမ်ဘီအေခေတ်၊ ဂျီစီဘီအေခေတ် တွေမှာလည်း ပြည်သူတွေက အဲဒီအဖွဲ့ကြီးတွေရဲ့ ဦးဆောင်မှုနောက်က ရဲရဲကြီးလိုက်ခဲ့ကြတယ်။ ရှေ့ကဦးဆောင်သူတွေ ညီညီညွတ်ညွတ်မရှိကြဘဲ ငါးထောင်စားဖြစ်ဖို့လောက်သာ လုံးပန်းနေခဲ့ကြတာကြောင့် ရေစုန်မျောသွားခဲ့ကြရတယ်။ အဲဒီနောက်ပေါ်လာတဲ့ 'တို့ဗမာအ စည်းအရုံး' ခေတ်မှာလည်း ပြည်သူတွေက တစ်ခဲနက် ထောက်ခံအားပေးခဲ့ကြတယ်။ ဆရာစံရဲ့ တောင်သူလယ်သမား ပုန်ကန်မှုကြီးနဲ့ ရေနံမြေ အလုပ်သမားသပိတ်တိုက်ပွဲကြီးတို့ဟာ ပြည်သူတွေဘက်က ဘယ်လောက်တာဝန်ကျေသလဲ ဆိုတာပြလိုက်တဲ့ သက်သေပဲဖြစ်တယ်။ အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ်တွေအများကြီး ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ ပြည်တွင်းစစ်ကြီး ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။အဲဒီကာလတွေ တစ်လျောက်လုံးမှာ
ပြည်သူတွေဘက်က တာဝန်ကျေခဲ့ကြတာချည်းပဲ။ ရှေ့ကခေါင်းဆောင် လုပ်သူတွေ တပ်လှန့် နှိုးဆော်သံပေး လိုက်တာနဲ့ ပြည်သူတွေတစ်ရပ်လုံး လှည်းနေလှေအောင်း မြင်းဇောင်းမကျန် ထွက်လာကြချည်း ဖြစ်တယ်။
ပြည်သူ့အတွက် လုပ်ဆောင်သူတွေကို ပြည်သူကအမြဲ ထောက်ခံအားပေးမှာ ဖြစ်တယ်။ ပြည်သူ့ဆန္ဒ သဘောထားကို ဂရုမစိုက်ရုံမက ပြည်သူကို နှိမ့်ချစော်ကားတဲ့ အပြုအမူမျိုး၊ လုပ်ရပ်မျိုး လုပ်ဆောင်လာရင်တော့ ပြည်သူက ဒဏ်ခတ်တာ ခံရပြီး . . . ခေါင်းဆောင်တွေခေါင်းရှောင်ကာ
လွတ်လပ်ရေးရပြီး နောက်ပိုင်း နှစ်တွေကို ပြန်ကြည့်၊ ပြည်သူတွေ ဘက်ကတာဝန်ကျေခဲ့ကြတာချည်းပဲ။ ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုခဲ့ကြသူတွေသာ တာဝန်မကျေခဲ့တာ။
'ဒီမိုကရေစီလိုချင်ရင် လူတိုင်းပါဝင်လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုတယ်'' ဆိုတဲ့စကားက ခေါင်းဆောင်တွေ ခေါင်းရှောင်ဖို့ ပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်။ ဒီမိုကရေစီဘိုးအေနိုင်ငံကြီး တွေ၊ ဒီမိုကရေစီ မိခင်နိုင်ငံကြီးတွေဆိုတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာလည်း ပြည်သူလူထုက သူတို့ကိုယ်စားဆောင်ရွက်ဖို့ ကိုယ်စားလှယ်တွေကို မဲပေးရွေးချယ်ပြီး လွှတ်တော်ထဲမှာ ဆောင်ရွက်စေ တဲ့ 'ကိုယ်စားပြုဒီမိုကရေစီ' (repre- sentative democracy)စနစ်ကို ကျင့်သုံးနေကြတာ ဖြစ်တယ်။ ရှေးခေါမ ခေတ်ကလိုပြည်သူတွေအားလုံးပါဝင် ဆုံးဖြတ်တဲ့'တိုက်ရိုက်ဒီမိုကရေစီ' (direct democracy) မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီအချက်တွေက မြန်မာပြည်သူတွေဟာ ဘယ်လောက် တာဝန်ကျေတယ်၊ ဘယ်လောက် နိုင်ငံရေးအသိရှိတယ်ဆိုတာကို ပြဆိုတဲ့ညွှန်းကိန်းတွေပဲ မဟုတ်ဘူးလား။ ဟောကြ၊ ပြောကြ သူတွေနဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဖတ်စာအုပ်ရေး ကြသူတွေအားလုံး ပြည်သူလူထုကို အထင်သေး အမြင်သေးတဲ့ စကားမျိုးတွေ မပြောစေချင်ဘူး။ တကယ် တတ်သိနားလည်သူတွေက ပြောရင်တော်သေးတယ်။ ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်တုန်းက အာဏာပါဝါရှိတဲ့ ဆိုရှယ်လစ်ကြီးတွေကို မျက်နှာချိုသွေးတည့်အောင်ပေါင်းပြီး ခေတ်ပျက်ဆိုရှယ်လစ်သူဌေးလုပ်ခဲ့သူတွေက အစိုးရက ဒီမိုကရေစီလည်း ပြောလိုက်ရော
ချက်ချင်းဆိုရှယ်လစ် မျက်နှာဖုံးချွတ်လိုက်ပြီး ခါတော်မီ ဒီမိုကရေစီ ဂုရုကြီးတွေအနေနဲ့ ဟောကြ၊ ပြောကြ ဒီမိုကရေစီ ဖတ်စာအုပ်ကြီးတွေ ရေးကြလုပ်လာကြတယ်။ အဲဒီလူတွေက မြန်မာတွေဉာဏ်ရည် နိမ့်ကျသေးတယ်။ ဒီမိုကရေစီအသိမ ရှိသေးဘူး။ လူတိုင်းလူတိုင်း ဒီမိုကရေစီ အသိစိတ်ဓာတ်မြင့်မားနေမှ ဒီမိုကရေစီနဲ့ ထိုက်တန်တယ်လို့ပြောတာ တွေကြားရတာကတော့ တော်တော်နားကြားပြင်းကပ်လှတယ်။
မိုက်ခရိုဆော့ဖ်၏ Windows 8 မြန်မာစာစနစ် တရားဝင်ပါဝင်မည်
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး လေးနှစ်ပြည့် သံဃာ့အဖွဲ့များ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်
သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရအနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်နေတဲ့ အရပ်သားအစိုးရ အဖြစ် လူထုက ယုံကြည် လက်ခံစေချင်တယ်ဆိုရင် ဖမ်းဆီးထားတဲ့ သံဃာတော်တွေ အပါအဝင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို ဦးစွာ လွှတ်ပေးဖို့ လိုအပ်ကြောင်း ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး (၄) နှစ်ပြည့် အခါသမယမှာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစု အဖွဲ့ကြီးက ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
၂ဝဝ၇ ခုနှစ် ရွှေဝါရောင် သံဃာနှင့် လူထု လှုပ်ရှားမှုကာလတွင် ငြိမ်းချမ်းစွာ မေတ္တာပို့ ဆုတောင်းသော သံဃာများ စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့၊ ရွှေတိဂုံ စေတီတော်မှ ဆင်းလာပြီး မြို့တွင်းသို့ စီတန်းလှည့်လည် ကြွချီတော်မူနေကြပုံ ဖြစ်ပါသည်။
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ကတည်းက သံဃာတော်တွေ တောင်းဆိုထားတဲ့ အချက်တွေကို တစုံတရာ လိုက်လျော လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း မရှိတဲ့အပြင် အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာ သံဃာတော် (၂၂၂) ပါး အကျဉ်းချခံထားရဆဲ ဖြစ်တယ်လို့ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစု ဦးဆောင်ဆရာတော်တပါး ဖြစ်တဲ့ ဦးဓမ္မဝံသ က မိန့်ကြားပါတယ်။“ဒီမိုကရေစီ စနစ်နဲ့ တကယ်သွားနေပါတယ်၊ အမျိုးဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်တဲ့ အစိုးရတရပ်အဖြစ် ရပ်တည်နေပါတယ် ဆိုတာကို သက်သေပြချင်ရင် ချိတ်ပိတ်ထားတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေကို ပြန်ဖွင့်ပေးဖို့၊ ဖမ်းဆီးထားတဲ့ ရဟန်းသံဃာတွေကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အားလုံးကို ခြွင်းချက်မရှိ ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ လိုပါတယ်”ဒါ့အပြင် တိုင်းပြည် စည်းလုံးညီညွတ်ရေး ရရှိဖို့အတွက် တိုင်းရင်းသားတွေအပေါ် ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်နေတာတွေ ရပ်ပြီး ပြည်တွင်းစစ် အဆုံးသတ်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ဖို့လည်း တိုက်တွန်းထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသား အားလုံး စိတ်ထိခိုက် နာကျင်စေမယ့် မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်းကို ရပ်တန့်ဖို့လည်း သံဃာ့ တပ်ပေါင်းစုရဲ့ ကြေညာချက်ထဲမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။အလားတူ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ၄နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် မြန်မာပြည်တွင်းက “ရဟန်းပျိုများ သမဂ္ဂ” လည်း ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ အဲ့ဒီ ကြေညာချက်မှာ- ရွှေဝါရောင် အရေးအခင်းမှာ အသက်ပေးလှူ သွားသူတွေကို ဂုဏ်ပြုလိုက်သလို အာဏာရှင်အမွေကို ဆက်ခံတဲ့ အစိုးရကို ရာဇဝတ်ကောင် အနေနဲ့သာ အသိအမှတ်ပြုတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။